Dr. Tint Swe's Writings: August 2018
ကျွန်တော်ရေးတာမှာ လွဲတာတွေ့ရင် ပြင်ပါမယ်။
ထောပနာ နဲ့ ထောမနာ ဘာကွဲပြားပါသလဲရှင့်
ခုခေတ်ထုတ်သတ်ပုံစာအုပ်တွေမှာ ထောမနာလို့ရေးတယ်။ ပါဠိကနေလာလို့ဖြစ်တယ်။ အရင်ထုတ်သတ်ပုံစာအုပ် တအုပ်မှာ ထောပနာလို့ ရေးထားတယ်။
ထောပနာ = ခြီးမွမ်းခြင်း (ကဝိဓဇသတ်ပုံကျမ်း)
ထောပေး = ထောဘေး = ထောပတ်ချက်၍ ကြွင်းကျန်သောပစ္စည်း
ကျွန်တော်ကတော့ ငယ်ငယ်ကတည်းက ထောပနာလို့ နှုတ်ကျိုးနေတယ်။
ရှင်မဟာရဋ္ဌသာရရေးသားခဲ့တဲ့ ဧကပိုဒ် ရတု
မြတ်မျိုးမြင့်မှန်၊ ကြင်ပေတန်၍၊ ရွယ်ရန်ရည်ရင့်၊ ဆင်တိုင်းတင့်သား၊ နတ်နှင့်နှုန်းနှုန်း၊ ဝင်းငြိမ့်ရွှန်း၍၊ လှလွန်းလွန်းလှည့်၊ ငါးကြန်ပြည့်ကို၊ ဖျော်ဖြည့်ဖြေဖျောက်၊ ကြိမ်ကြိမ်လျှောက်လည်း၊ ပြစ်ပျောက်ပျို့ပျို့၊ ဖြူမြိတ်စို့နှင့်၊ သူသို့သွေသည်၊ ဟုတ်မည်မှန်းဘွယ်၊ ဝမ်းဝယ်ဝိုးဝါး၊ စိတ်လွင့်ပါး၍၊ ကြိုးကြားကြံကာ၊ ဂိမှာသန်ဆောင်၊ ချောင်းချောင်းခခ၊ ကာလရှည်ဖင့်၊ မျိုးမြတ်မြင့်သည်၊ လွမ်းလင့်လွန်လှည့်လေလိမ့်လော။
နတ်သျှင်နောင်ရေးသားခဲ့တဲ့ ရာဇဓါတုကလျာဖွဲ့ ရတု
တင့်လှပေဟန်၊ ဖက်မဲ့ရန်တည့်၊ ခြောက်တန်နတ်ရွာ၊ ဘုံကလာသို့၊ ပြာပြာလတ်လတ်၊ မွတ်မွတ်ညက်ညက်၊ ရွှန်းရွှန်းစက်မျှ၊ ဝင်းလက်ရောင်ရွှေ၊ အခေါင်ပေတည့်၊ တောင်နေနတ်ဟန်၊ မြတ်သစ်ကြန်နှင့်၊ ပန်းမှန်ရေးချ၊ ထုံးနေမကျော၊ ပန်းရောဆံကြာ၊ ချတိုင်းသာလျှင်၊ ရွှေဝါဖိတ်ရွှင်း၊ ထည်ချင်းစံပယ်၊ နံ့ကြွယ်လှိုင်ကြူ၊ မဉ္ဇူမျက်မည်း၊ ပေါ်ထပ်စည်းနှင့်၊ မရည်းမထင်၊ ဖြုတ်ချည်းမြင်က၊ နတ်ပင်ယိုးမှား၊ ဝိုးဝါးတွေးချွတ်၊ စိတ်လုံးညွတ်သည်၊ ဘုံထွတ် နန်းတောင် နေတို့လော။
ငယ်သူငယ်ချင်းတယောက်က တင်ထားတယ်။ မြန်မာစာသတ်ပုံစာ။ သူနဲ့ကျွန်တော်က ဆရာတူတပည့်တွေ။ မုံရွာ အထက (၂) မှာ ဆရာ ဘုတလင်ချစ်လေးက မြန်မာစာသင်ပေးပါတယ်။
သူကဥပဒေပညာသင်ယူခဲ့သူ။ သူဆက်ရေးတာက မှတ်မှတ်ရရလေ့လာကြည့်တဲ့အခါ၁၉၈၁ ခုနှစ်ထိ ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ ဥပဒေစာအုပ်များမှာ (တစ်)မသုံး၊ (တ)ကိုပဲ သုံးခဲ့ကြပါတယ်။ ၁၉၈၂ခုနှစ်ကစပြီး(တစ်) တွေပြောင်းသုံးခဲ့ကြတာ လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဆေးပညာသင်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်က တအသုံးတွေနဲ့ တစ်အသုံးတွေကို လေ့လာပြုစုနေတာ အတော်ကြာလို့ သက်သေခံပစ္စည်းတွေ တနေ့တခြားများများလာတယ်။
ဆင်ပြောင်ကြီး အမြီးမှတစ်၊ တစ်ငှက်၊ တစ်ဆို့၊ တစ်တစ်ခွခွ၊ တစ်တစ်ရစ်ရစ်၊ တစ်တရားခံ၊ တစ်တီတူး၊ (တီတီတူးငှက် ယခင်သတ်ပုံစာအုပ်)၊ တစ်ရှူး (ဆဲလ် အစုအဝေး)၊ တစ်ရှူး (သန့်ရှင်းရေးသုံး စက္ကူ)၊ တစ်လစ်၊ တစ်နှစ် စာကိုချစ်၊ တစ်-နှစ်-သုံး၊ တစ္ဆေမှင်စာ၊ ပြူတစ်၊ ရင်ထဲမှာတော့ တစ်ဆို့ဆို့၊ သားငါး တုံးတစ်သည်၊ သားတစ် ငါးတစ်။
ကျန်တဲ့ (တ) တွေတိုင်းမှာ စသတ်ပါ။ တတွေကို မလိုအပ်ပဲ စသတ်ထည့်တာ မလုပ်သင့်ပါ။ အဲလိုလုပ်တာ ပလီတာ။
Aung Myin Tun ကျေးဇူး။
ဗိုက်ဗိုက်တို့ ရှောင်ကြဉ်သင့်သော အစားအစာများဆိုတဲ့ဆောင်းပါးထဲမှာ မာဂျရင်းဆိုတဲ့ အစားအစာတမျိုးပါနေပါတယ် အဲ့ဒါ ဘယ်လိုအစားအစာလဲဆိုတာ ပြောပြပေးပါဆရာ လေးစားလျှက်
အဲဒီ ဗိုက်ဗိုက်တို့ ရှောင်ကြဉ်သင့်သော အစားအစာများကို ဘယ်သူရေးသလဲ မသိ။ ကျွန်တော်ရေးတာတော့ မဟုတ်လောက်။ ကျွန်တော်က ကိုယ်ဝန်ဆောင်လို့သာ ရေးတယ်။
Margarine မာဂျရင်းကို ထောပတ်တုလို့လည်း ခေါ်ကြတယ်။ ၁၈၆၉ ခုနှစ်ကတည်းက ပြင်သစ်မှာ တတိယ နပိုလီယန် လက်ထက်မှာ စသုံးတယ်။
ထောပတ်ကို နွာနို့ကနေလုပ်တယ်။ မာဂျရင်းကို အသီးအနှံဆီနဲ့ ရေကနေလုပ်တယ်။ နွားနို့ပါတာလည်းရှိတယ်။ အဆီဓါတ် အနည်းဆုံး ၈ဝ% ပါတယ်။ ယူအက်အေမှာ နွားနို့မပါ။ အဆီပါနှုန်း မတူကြ။
ကျန်းမာရေးအရယှဉ်းကြည့်ရင် မာဂျရင်းက ထောပတ်ထက် သာတယ်။ ဆိုးတဲ့ကိုလက်စထော မများစေပါ။ နှလုံးရောဂါအတွက် မာဂျရင်းက ထောပတ်ထက်သင့်တယ်။
ကျွန်တော် မြန်မာဘာသာပြန်ဆရာလုပ်နေတဲ့ကျောင်း လာမယ့်တနင်္လာနေ့မှာ ကျောင်းပိတ်မယ်။ လေဘာဒေးတဲ့။
မြန်မာပြည်မှာတော့ မေဒေးဆိုရင် မသိတဲ့သူမရှိလောက်ပါ။ နိုင်ငံတကာအလုပ်သမားနေ့ကိုခေါ်တယ်။ လေဘာဒေးကို သတိမထားမိလောက်ပါ။ ကျွန်တော်လည်း ဒီတိုင်းပြည်နေရမှသာသိတယ်။
လေဘာဒေးဆိုတာ အမေရိကမှာပဲရှိတယ်။ မြန်မာလိုပြန်ရင်လည်း အလုပ်သမားနေ့ပဲ။ မေဒေးနဲ့ အနှစ်သာရချင်းမတူပါ။ လေဘာဒေးဆိုတာ အမေရိကန်အလုပ်သမားတွေရဲ့ လူမှုရေးနဲ့ စီးပွါးရေး စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းကို ဂုဏ်တင်တဲ့နေ့ရက်တဲ့။ ၁၈၈၂ ခုနှစ် စက်တင်္ဘာ (၅) ရက်နေ့မှာ နယူးယောက်ကနေ စပါတယ်။ နှစ်စဉ် စက်တင်္ဘာ ပဌမတနင်္လာနေ့လို့ သိတ်မှတ်ထားတယ်။ တရားဝင်အလုပ်နားရက်လည်းဖြစ်တယ်။ ဒီနှစ်တော့ ၃-၉-၂ဝ၁၈ နေ့မှာ ကျတယ်။
မြန်မာပြည်မှာလည်း လူမှုရေးတွေဖွံ့ဖြိုးစည်ပင်၊ တိုင်းပြည်စီးပွါးရေးလည်းကြွယ်ဝချမ်းလာတဲ့တနေ့မှာ လေဘာဒေးလို့ လုပ်နိုင်ကြရင်ကောင်းမှာပဲ။ အခုတော့ နေ့တိုင်းက လောဘဒေးဖြစ်နေသေးတယ်။ ဆောရီး။
ကျွန်တော် မြန်မာပြည်ကိုအလည်ပြန်စဉ်က ရန်ကုန်မြို့မှာ မေဒေး ခေါ် အလုပ်သမားနေ့ပွဲကို တက်ခဲ့ပါတယ်။ လှိုင်သာယာမှာ ကျင်းပတယ်။ နေပူပူ ဖုံထူထူနဲ့ သဘာဝကျတယ်။ မြန်မာပြည်က အလုပ်သမားတွေဘဝ တိုးတက်ပါစေ။
International Workers Day နိုင်ငံတကာအလုပ်သမားနေ့ မေဒေးအမေရိကမှာ ဘာလို့မကျင်းပသလဲ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/05/international-workers-day-2015.html
The weak get eaten စာက လူကိုစား၍ နိုင်ငံရေးက တိုင်းပြည်ကိုစား၏
အရင်ရေးဘူးတဲ့ Lost in Translation ဘာသာပြန်ထဲမှာ ဘာသာပြန်ရာမှာ မြန်မာမှုပြုကြတဲ့အခါ သဘောမကျတာလေးတွေကို ရေးပါတယ်။ စာတွေဘယ်လိုရေးသလဲ ထဲမှာ စာကိုနိုင်ငံပြုပြင်ရေးလို ရေးသားသူတွေ များပြားစေချင်တယ်။ စာကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြုပြင်ရေးလို ဖတ်ကြသူတွေ ပေါများစေချင်တယ်လို့ ရေးခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော်ငယ်ငယ်က ဖတ်ဖူးတဲ့စာတွေ၊ ကဗျာတွေထဲမှာ မြန်မာနာမည်မဟုတ်တာတွေ ပါလာရင် ဖတ်ရတာခက်တယ်။ ဘာသာပြန်စာတွေထဲမှာ လူနာမည်တွေ၊ နေရာဒေသနာမည်တွေ မြန်မာလိုမဟုတ်တာတော့ မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့။ ဒါလဲဘဲ အဲလိုနာမည်တွေကို စာရိုက်တဲ့အခါ (ပုံနှိပ်စာလုံးစီတဲ့အခါ) သီးသီးခြားခြား လုပ်ပေးမထားရင် သဘောပေါက်အောင် ထပ်ထပ်ဖတ်နေရတာ သဘောမကျပါ။ အခုလည်းအဲလိုဟာတွေကို ဖတ်နေရတုန်းဘဲ။
ဘာသာပြန်ကဗျာတွေမှာ မြန်မာနာမည်မဟုတ်တာတွေပါတာကို နားလည်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာကဗျာစစ်စစ်ထဲမှာ နိုင်ငံခြားနာမည်တွေပါလာရင် တမျိုးကြီးဘဲလို့ ထင်မိတယ်။ အော့့် နိုင်ငံခြားဗဟုသုတ ပြည့်ဝပါပေရဲ့လို့တော့ ချီးကျူးမိတဲ့အခါတော့ ရှိပါတယ်။ အဲလိုလုပ်ရတာက အတော်နည်းလှတယ်။ ဘိုနာမည်လို့ခေါ်တဲ့ အင်္ဂလိပ်နာမည်တွေကို ထမင်းစားရေသောက်သုံးတာမျိုးကြရင် ဒွေးတော်လွမ်းလှကြသလား ရိုးစွပ်မိတယ်။ နိုင်ငံတကာသုတနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ အတန်အသင့်တော့သိပါရဲ့ မြန်မာဆရာသမားများက လိုက်မမီတာတွေကို ရေးနိုင်ကြတာကိုတော့ အားမကျပါ။
ကိုလိုနီခေတ်မှာ ရာဇဝင်ထဲက ဘုရင်တွေကို ဇာတိသွေးဇာတိမာန်တက်ကြွစေဘို့ရည်ရွယ်ပြီး ပုံကြီးချဲ့ရေးကြတယ်။ သမိုင်းအမှန်ကို လွဲသိစေတယ်။ လွတ်လပ်ရေးရပြီးမှာလဲ အနော်ရတာ တော်မှတော်။ မင်းတုန်းမင်းကြီး ဘုန်းတန်ခိုးကြီး၊ နယ်ချဲ့အစိုးရမှန်သမျှ ရွံ့မုန်းကြရတယ်။ အတွေးအမြင်ကို လိုတာထက်ပိုပြီး အမှောင်တိုက်ပေးတာနဲ့ တူနေတယ်။ ကိုလိုနီတွေက ဘာလို့ ဒို့နိုင်ငံကို သိမ်းနိုင်တာလဲ၊ ဒို့ကဘာညံ့လို့လဲကို ဝေဖန်ဆန်းစစ်တဲ့အခါ ခက်ခဲစေတယ်၊ သင်္ခန်းစာမယူတတ်စေပါ။
ဒိနောက် လက်ဝဲ-လက်ျာအပြိုင်ခေတ်လို့ခေါ်ရမဲ့ ကာလတွေမှာ မြန်မာပြည်က လူအတော်များများဟာ လက်ဝဲဘက်ကို သိသိသာသာကြီးလိုက်ခဲ့ကြတယ်။ စာတွေ၊ ကဗျာတွေထဲမှာ ဆိုဗီယက်၊ တရုတ်နဲ့ ဗီယက်နမ်နာမည်တွေက လွှမ်းမိုးလာခဲ့တယ်။ မြစ်ဆိုရင် ဗော်လ်ဂါနဲ့ ယန်စီကိုသာ ရိုးမယ်ဖွဲ့ကြပြီး၊ ဧရာဝတီနဲ့ ချင်းတွင်းတို့ကို ထည့်တွက်စရာထဲမှာ မပါသလိုထားခဲ့ကြတယ်။ မစစ္စပိ မြစ်တို့ နိုင်းလ် မြစ်တို့ကို ပထဝီမှာသာပါတယ်။ ဘယ်ဗမာ (မြန်မာ) မှ အရေးမပါတော့ဘဲ၊ အင်တာနေရှင်နယ်လေးသီချင်းသာ အရေးပါလာတော့တယ်။
စစ်အစိုးရခေတ်မှာ တမျိုးတဘာသာလုပ်လာပြန်တယ်။ စစ်သူကြီးဘုရင်တွေကိုရွေးပြီး သိဒ္ဓိတင်ပေးတယ်။ သမိုင်းကို ရှေးဟောင်းသုတေနတွေ့ရှိချက်အရ မရေးတော့ဘူး။ မြန်မာပြည်မှာ အာဇာနည်ဆိုတာ မထားတော့ပါ။ ရက်စက်မှရာဇာလို့ ထင်စေအောင်လုပ်လာတယ်။
ဒီအကျိုးဆက်တွေကြောင့် ခုချိန်မှာ အဲလိုမတူတာတွေဟာ အစပ်အဟပ်မတည့်စွာ ရောထွေးနေပါတော့တယ်။ တချို့က ဇာတိမာန် လုပ်လိုက်၊ မျိုးချစ်လုပ်လိုက်။ တချို့ကတော့ နိုင်ငံခြားကဟာထည့်သုံးကြတယ်။ ချေဂွေဗားရား ခေတ်စားတုန်းပဲ။ ဘင်လာဒင်တီရှပ် ဝတ်ချင်သူပေါ်တာ အဲဒီစနက်တွေဘဲ။ စစ်ပွဲတွေနိုင်သူကသာ တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ် မင်းလုပ်သင့်တယ် ဇာတ်သွင်းခံထားရတယ်။
နိုင်ငံရေးနဲ့ စာတွေကနေ လူတွေကို ဆွဲစားနေတယ်။ ကနေ့အခြေအနေမှာ အရောင်တွေကတော့စုံပါရဲ့ အစပ်အဟပ်က မတည့်ပါ။ မြန်မာပြည်မှာ နိုင်ငံရေးကောင်းလာဘို့ဆိုတာ စာတွေကပါ မှန်တည့်ကောင်းမွန်နေရပါမယ်။ စာတတ် ပညာတတ်တွေ နိုင်ငံရေးပါတတ်ကြစေချင်တယ်။
သိန္ခိက ဘာကိုပြောတာလဲ မသိတော့။ သိဒ္ဓိ နဲ့ Typing Error ဖြစ်သွားတာလားလို့။
ဟုတ်ပါ့။ The weak get eaten စာက လူကိုစား၍ နိုင်ငံရေးက တိုင်းပြည်ကိုစား၏ပို့စ်မှာ ကျွန်တော် စာရိုက်မှားခဲ့တာ။ ကျေးဇူး။ အမှားမပါ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ မဟုတ်။
သိဒ္ဓိတင်ဆိုတာ သိဒ္ဓိ ပါဠိကနေလာတယ်။ ချီးမွမ်းသည်။ အမွှမ်းတင်သည်။ ဂုဏ်တင်သည်။ ရှိတဲ့အရည်အသွေးထက်ပိုပြီး တောက်ပြောင်စေအာင်လုပ်သည်။ ကဲ့ရဲ့၊ ရှုတ်ချနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်စကားလုံးဖြစ်တယ်။
ကျွန်တော်စာထဲက စစ်သူကြီးဘုရင်တွေကိုရွေးပြီး သိဒ္ဓိတင်ပေးတယ်ဆိုတာ ရှိတဲ့အရည်အသွေးထက်ပိုပြီး တောက်ပြောင်စေအာင်လုပ်သည်လို့ ဆိုလိုပါတယ်။
ရွှေနန်းသုံး ဝေါဟာရအဘိဓါန်စာအုပ်ရလာတယ်။ အဖုံးပါ မြန်မာစာသတ်ပုံကစပြီး တင်ပြချင်တယ်။ လူအတော်များများက (ဓ) ဆိုတိုင်း (ဓာ) နဲ့ရေးမှသာ မှန်တယ်လို့ ထင်နေကြတာ မဟုတ်ပါ။ အရင်က စာဖတ်တဲ့သူတွေ မျက်စိရှင်းအောင် (ဓါ) လို့ရေးကြတာ များတယ်။ နှစ်မျိုးလုံး မှန်ပါတယ်။
စာအုပ်က လက်နှိပ်စက်မူဖြစ်တယ်။ ခုခေတ်လို ကွန်ပြူတာစာရိုက် လေဆာပရင်တာနဲ့ထုတ်တာတွေထက် မြန်မာစာရေးသားတာ မှန်တယ်။ နမူနာလေး နည်းနည်းသာတင်ပြမယ်။
မင်းဧကရာဇ်ဟူသည်မှာ။ ။ ဧကသဒ္ဒါ - တခုသောအနက် အတူမရှိ အမြတ်ဟူသော အမည်များကိုရသည်။ အတူမရှိ မြတ်သာမင်း ဆိုလိုသည် - အဓိပ္ပါယ်ယူရမည်ဟူ၍ ရာဇသေဝက ဒီပနီကျမ်းကဆိုသည်။
ဧကရာဇ်မင်းမြတ်တို့ ဆောင်ရွက်တော်မူမြဲကိစ္စမှာ တနေ့သုံးယံညီလာခံခြင်း၊ တိုင်းရေးပြည်မှု သာသနာမှုနှင့်တကွ ကိုယ်တော်ရေးမှစ၍ တိုင်ပင်တော်မူသင့်သည်များကို တိုင်ပင်နှီးနှောတော်မူခြင်း၊့့
တစ်ခုသောအနက် မဟုတ်ပါ။ တစ်နေ့သုံးယံ မဟုတ်ပါ။ နှင့်တစ်ကွ မဟုတ်ပါ။ စာအုပ်တအုပ်လုံးမှာ သတ်ပုံမှန်တွေနဲ့သာ ရိုက်နှိပ်ထားပါတယ်။ နောက်မှ ပလီပြီးပြင်ထားတဲ့ တစ်သတ်ပုံတွေ မဟုတ်ကြောင်းပါ။
လူတယောက်မှာ မိဘနှစ်ပါးအရင်က ဘိုးဘွားစဉ်ဆက် အရေအတွက် ဘယ်လောက်ရှိသလဲ တွက်ဆကြည့်သူ အတော်ကို ရှားမယ်ထင်ပါတယ်။ လူတယောက်ရဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း တရာ၊ တထောင်အတွက် ဆွေမျိုးစဉ်ဆက် အရေအတွက် မသိနိုင်ကြဘူးလို့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက ယူဆကြပါတယ်။
၁။ ဘ၊ ဘိုး၊ ဘေး၊ ဘီ၊ ဘင်၊ ဘောင်၊ ဘော။
၂။ ဘ၊ ဘိုး၊ ဘေး၊ ဘီ၊ ဘင်၊ ညှောက်၊ စေ့။
၃။ ဘ၊ ဘိုး၊ ဘေး၊ ဘီ၊ ဘဲ့၊ ဘော့၊ ဘွေး။
၄။ အဖ၊ အဖိုး၊ အဘွေး၊ အဘဲ၊ အဘီ၊ အဘော၊ အဘောင်။
၁ ဆက် = အမေနဲ့ အဖေ = ၂ ယောက်။
၂ ဆက် = အဖိုးနဲ့အဖွား = ၄ ယောက်။
၃ ဆက် = အဘွေးနဲ့ အဘဲ = ၈ ယောက်။
၄ ဆက် = အဘောနဲ့ အဘောင် ၁၆ ယောက်။ စသဖြင့် ၂ ဆတိုးတိုးသွားတယ်။
၁ဝ ဆက်ဆိုရင် စုစုပေါင်း ၁,ဝ၂၄ ယောက်ရှိမယ်။
၂ဝ ဆက်ဆိုရင် စုစုပေါင်း ၁,ဝ၄၆,၅၇၆ ယောက်ရှိမယ်။
၃ဝ ဆက်ဆိုရင် စုစုပေါင်း ၁,ဝ၇၃,၇၄၁,၈၂၄ ယောက်ရှိမယ်။
၄ဝ ဆက်ဆိုရင် စုစုပေါင်း ၁,ဝ၉၉,၅၁၁,၆၂၇,၇၇၆ ယောက်ရှိမယ်။
ဂျင်နရေးရှင်း ၁ ဆက်ကို ပျမ်းမျှ ၂၅ နှစ်ထားမယ်။
၅ ဆက်ဆိုရင် လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၂၅ နှစ်ကဖြစ်မယ်။
၁ဝ ဆက်ဆိုရင် လွန်ခဲ့တဲ့ ၁,ဝ၂၄ နှစ်က ဖြစ်မယ်။ အနော်ရထာမင်းအရင် စုက္ကတေးမင်းလက်ထက်လောက်ဖြစ်မယ်။
၂ဝ ဆက်ဆိုရင် လွန်ခဲ့တဲ့ ၁,ဝ၄၈,၅၇၆ နှစ်က ဖြစ်မယ်။
၃ဝ ဆက်ဆိုရင် လွန်ခဲ့တဲ့ ၁,ဝ၇၃,၇၄၁,၈၂၄ နှစ်က ဖြစ်မယ်။
၄ဝ ဆက်ဆိုရင် လွန်ခဲ့တဲ့ ၁,ဝ၉၉,၅၁၁,၆၂၇,၇၇၆ နှစ်က ဖြစ်မယ်။
ကျွန်တော့် ဖင်မလီထရီး ခေါ် မိသားစုသစ်သစ်ပင်ကြီးက အမျိုးတွေအမည်ကို စာအုပ်ပါးလေးတခုပြုစုထားတယ်။ ပြုစုသူတွေကို တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကင်းဝန်မင်းကြီးဦးကောင်းကနေ စတယ်။ စုံသေးတာမဟုတ်လို့ ဖြည့်စွက်ကြရဦးမယ်။ ကျွန်တော့်အထက် ၃ ဆက်အထိသာရှိတယ်။ ကျွန်တော်နောက်မှာလည်း အခုထိ ၃ ဆက်ရှိနေပြီ။
ဆရာ ခင်ဗျား britanica encyclopedia အကြောင်းလေး နည်းနည်းသိချင်လို့ပါ။ သူကနှစ်စဉ် A ကနေ Z အထိ တအုပ်ချင်း ထွက်တာပါလား ဒါမှမဟုတ် A ကနေ Z အထိ အကုန်လုံးကို တအုပ်တည်း ထွက်တာပါလားခင်ဗျ။ ပြီးတော့ အတွဲလိုက် A ကနေ Z အထိ အကုန်ဈေးနှုန်းဆို ဘယ်နှဒေါ်လာဝန်းကျင်လောက်ရှိပါသလဲ ခင်ဗျာ။
Encyclopædia Britannica (British Encyclopaedia) ခေါ် ဗြိတိသျှစွယ်စုံကျမ်းဟာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ ရေးထားတာ ဖြစ်တယ်။ ကျမ်းပြုသူပေါင်း ၄ဝဝဝ ကျော်ကနေ ပြုစုထားတယ်။ နိုဗယ်လ်ဆုရသူပေါင်း ၁၁ဝ ပါဝင်တယ်။ အမေရိကန်သမတ ၅ ဦးလည်းပါတယ်။ ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်ထုတ် ၁၆ ကြိမ်မြောက်ဗာရှင်းမှာ ၃၂ တွဲရှိတယ်။ စာမျက်နှာစုစုပေါင်း ၃၁၆၄ဝ ရှိတယ်။
• The Encyclopedia Britannica: A Dictionary of Arts, Sciences, Literature & Genera $1,989.95 + $19.99 Shipping
• Encyclopaedia britannica 200th Anniversary Edition $1,000.00
ကျွန်တော် နယူးဒေလီမှာနေစဉ်က စာအုပ်ပြပွဲတခုမှာ အထူးဈေးနှုန်းနဲ့ရောင်းလို့ တစုံဝယ်နိုင်ခဲ့တယ်။ မှတ်မိသလောက် ရူးပီး ၃ သောင်းကျော်ပေးရတယ်။ ကျွန်တော် ယူအက်စ်အေကိုမပြောင်းရမီ မုံရွာမှာနေတဲ့ ညီဆီကို ရောက်အောင် ပို့ပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ ကူညီပို့ပေးသူတွေကို ကျေးဇူးတင်တယ်။
ဗြိတိသျှစွယ်စုံကျမ်းရော ရှိတ်စပီးယားစာတွေရောကို အကြိမ်ပေါင်းမြောက်များစွာ ထပ်ရိုက်ထုတ်ဝေပါတယ်။ မူရင်းစာတွေသတ်ပုံတွေကို ပြင်မထုတ်ပါ။ မြန်မာပြည်မှာသာ ဆဋ္ဌသင်္ဂါယနာတင် ပိဋကတ်တော်တွေကလွဲရင် ရှိရှိသမျှ စာအုပ်တွေကို ပေါ်လစီသတ်ပုံတွေနဲ့ ပြင်ရေးထုတ်ဝေရောင်းစားနေကြတယ်။ ကျွန်တော်တော့ ရှက်စရာကောင်းတယ်လို့ ထင်တယ်။
(စ) စိတ်ကူးချိုချို ကစာအုပ်ဈေးရောင်းပွဲလုပ်တော့ ကိုယ်ရှာနေတဲ့ကဗျာတပုဒ်တွေ့ရတော့ စာအုပ်ကို ဝယ်လိုက်ပါတယ်။ တင်မိုးကဗျာပေါင်းချုပ်အမှတ် ၁ ပါ။ အကုန် တစ်တွေပြင်ရိုက်ထားတော့အခုဖတ်ရင်း correction ink တဗူးဝယ်ပြီး ဖတ်ရင်းလိုက်ပြင်နေတယ်။ ကိုယ်ဒါပဲလုပ်နိုင်ပါတယ်။ (ဆုံး)
ဟုတ်ပါ့။ ထွက်စက ရတာ။ ကျွန်တော်က ဒေလီမှာသာနေရသေးတယ်။ တတွေကို တစ်လုပ်ထားလို့ လက်တလုံးစာ ပိုထူသွားတယ်။ ဈေးနှုန်းတင်လို့ ကောင်းတာပေါ့။
ဆရာတင်မိုးက ဒေါက်တာဂျော်နီကဗျာမှာ တစ်တွေမရေးပါ။
ဆရာတင်မိုးထက် သတ်ပုံတော်သူတွေရေးတဲ့ စာတွေရော ကဗျာတွေရောကို ကျွန်တော်က မဖတ်တတ်ပါ။
တခါတရံ အင်းယားကန်မှာ https://doctortintswe.blogspot.com/2017/08/blog-post_60.html
အသက် ၆၁၊ မ (ဇနီး)၊ ဆီးချို/သွေးတိုး ရှိ၊ ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေ အထူးကုနှင့် တလတကြိမ် ပြလျက်ရှိ၊ သောက်ဆေး metformin dank တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ amlosun 5၊ HIV, HBs နှင့်HCV မရှိပါ၊ fatty liver ရှိပါတယ်၊ အခု အသည်းမှာ အကျိတ် (7.2cm × 8.2cm) တွေ့လို့ပါ ဆရာ၊ အသည်းအထူးကုက ခွဲစိတ်မှာလား၊ ဆေးဖျန်းမှာလားဆိုတာကို လူနာရှင်ဘက်ကို ဆုံးဖြတ်ခိုင်းတော့ ဘာလုပ်ရမှန်း မသိဘဲ ဖြစ်နေရပါတယ်။ ဇနီးက ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်း၊ ဖျားခြင်း၊ ကိုယ်လက် ကိုက်ခဲခြင်း၊ အစားအသောက် ပျက်ခြင်းတွေလည်း မရှိပါဘူး။ ဇနီးထက်ဆိုးတဲ့ လူနာတွေ အများကြီးဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ကို ရှင်းပြချိန် နည်းပုံရပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ဆရာဆီကိုဘဲ အားကိုးတကြီးနဲ့ စာရေးမေးမြန်းလိုက်ရပါတယ်၊ အကျိုး အပြစ်များ ရှင်းပြပေးစေချင်ပါတယ် ဆရာခင်ဗျား။ CT မှတ်ချက်၊ ultra sound မှတ်ချက် နဲ့ သွေးစစ်ချက်များကို အောက်မှာ ပို့ပေး ထားပါတယ်ခင်ဗျား။
SOL Liver ဆိုတာ အာလ်ထွာဆောင်းမှတ်ချက်မှာ ရေးလေ့ရှိတယ်။ နေရာယူထားတဲ့ အကျိတ်လို့ဆိုလိုတယ်။
ယူအက်အေမှာ လေ့လာမှုတွေလုပ်တယ်။ Cirrhosis ခေါ် အသည်းခြောက်နေသူ ၄၄ ယောက်မှာ Space-occupying lesion ခေါ် SOL တွေ့တော့ အသားစဖြတ်ယူစစ်ဆေးတယ်။ လူနာ ၂၆ ယောက်မှာ Hepatocellular carcinoma ခေါ် အသည်းကင်ဆာတွေ့တယ်။ ၂၃ ယောက်မှာ Tumor သို့မဟုတ် Dysplasia ခေါ်တာမတွေ့ရပါ။ ၅ ယောက်မှာ Liver cell dysplasia သာတွေ့ပြီး ကင်ဆာမတွေ့ရ။ အဲဒီ ၅ ယောက်ဟာ နောင်မှာ ကင်ဆာဖြစ်လာကြတယ်။
False-negative ခေါ် မှားပြီး ကင်ဆာမတွေ့သူ ၅ ယောက်ရှိတယ်။
အဲတာကြောင်း US-assisted liver biopsy ခေါ် အသားစဖြတ်ယူစစ်ဆေးနည်းရဲ့တိကျမှုဟာ 72% ကနေ 86% ရှိတယ်။
Liver cancer early detection အသည်းကင်ဆာ စောစောဘယ်လိုသိနိုင်သလဲ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/liver-cancer-early-detection.html
Liver cancer အသည်းကင်ဆာ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/05/liver-cancer.html
Out of the EQ and IQ အီးကျူ အိုင်ကျူ ဘောင်အပြင်ကနေပြောခြင်း
အရင်တခါ IQ နဲ့ EQ အကြောင်းတင်တော့ ကိုယ့်အမြင် ကိုယ့်ယူဆချက်တွေရေးလာကြတယ်။ IQ နဲ့ EQ ဝေါဟာရ အသုံးဟာ တီထွင်ကြတဲ့ ပညာရှင်တွေရဲ့ မူပိုင်စကားဖြစ်ပြီး မူပိုင်စံတွေရှိပါတယ်။ လူတွေရဲ့ဉာဏ်ရည်ကို သိပ္ပံနည်းကျ ပြောတာတွေဖြစ်တယ်။ အဲဒီစာထဲမှာ ကျွန်တော့်အမြင်အာဘော် ထည့်မထားပါ။ တချို့က ကျွန်တော့်ကို IQ ဖက်ကနေ ရေးသလိုထင်ကြတယ်။ တချို့က သူတို့သန်တာကြိုက်တာကို ရေးလာကြတယ်။
ကျွန်တော်ရေးတာက လူတိုင်းကိုယ်စီမှာ IQ ရော EQ ပါရှိနေတာပါ။ ကြိုက်တာတခုတည်းရွေးရှိတာ မဟုတ်ပါ။
IQ နဲ့ EQ အကြောင်းပြောကြရင် သူ့ဘောင်နဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အောက်ကနေသာ ပြောရမှာပါ။ ကနေ့မြန်မာ့ နိုင်ငံရေးမှာ ဒီမိုကရေစီဖြစ်ဖြစ်၊ လူ့အခွင့်အရေးဖြစ်ဖြစ်၊ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်ဖြစ်၊ ပြည်ထောင်စုမူဖြစ်ဖြစ်ပြောရင် ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံကို ကျော်ပြောလို့သာရသလောက်ပေမဲ့ လုပ်လို့ မရသေးသလိုပါပဲ။
IQ နဲ့ EQ ခွဲပြောတာ ဟုတ်ပါ့မလား။ လူတွေရဲ့ဉာဏ်ရည်ကိုပြောရင်တော့ IQ နဲ့ EQ ကနေကျော် ပြောရပါတော့မယ်။ လူတဦးရဲ့ဉာဏ်ရည်နဲ့ အောင်မြင်မှုကို နှိုင်းယှဉ်ပြောကြတယ်။ ဘာကတော်လို့၊ ဘာကကောင်းလို့ဖြစ်တယ်။
CEO လို စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ ဦးဆောင်တွေကိုတမျိုး၊ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုတမျိုး တွက်ရပါမယ်။ နိုင်ငံရေးမှာ ဉာဏ်နဲ့မဆိုင်ဘူးပြောရမလား။ တခြားအချက်အလက်တွေကြောင့် ထိပ်ရောက်တာမျိုးရှိတယ်။ ဂျာမဏီမှာ ဟစ်တလာဟာ လိုအပ်ချက်အရ အောက်နားကနေ ထိပ်ရောက်လာတာ။ ဦးနုဟာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလုပ်ကြံခံရလို့ ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်တယ်။ အဲတာကြောင့် ရာဇပလ္လင် ဖင်ကပ်ပါလာတာလို့ ပြောခဲ့ကြတယ်။ သူ့အရည်အချင်းနဲ့သူလည်း ရှိပါတယ်။ မြောက်ကိုရီးယား ခေါင်းဆောင်ကတော့ မိဘအရှိန်အဝါနဲ့သာ နေရာရလာတာပါ။ FIFA ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းကိုလည်းကြည့်ပါ။ အဲတာတွေက IQ, EQ နဲ့ ဆိုင်ပါ့မလား။
EQ ဆိုတာ စိတ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆိုင်တယ်။ ကိုယ့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကို မျိုသိပ်ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းနဲ့ သူများတွေရဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားမှုကို သိပြီး အသုံးချနိုင်စွမ်းရှိသူဟာ EQ မြင့်သူဖြစ်တယ်။ မျက်ရည်ကျစေအာင်၊ ပြုံးရွှင်ရယ်မောစေအောင် ပြောဆို ရေးဖွဲ့တာမျိုး လုပ်ပြီး စိတ်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်လာသူတွေအပေါ် အနိုင်ယူနိုင်စွမ်းကလည်း EQ ပဲလား။ တက်နေတဲ့ အစိုးရနဲ့ ထောက်ခံသူတွေကို အမြင်ကပ်အောင်၊ ဘာသာရေးအမုန်းတရားပွါးအောင် လုပ်ပေးသူတွေကတော့ EQ ကို ကောင်းကောင်း အသုံးချနေတာလား။
EQ ကိုလည်း တယောက်တမျိုးရေးကြတယ်။ ကျွန်တော်လည်း တမျိုးရေးမယ်။ Emotional Intelligence (EQ) မှာ Emotional quotient (EQ) စိတ်လှုပ်ရှားမှုမပါရင်တော့ EQ မဟုတ်တော့ပါ။ သိပ္ပံနည်းနဲ့ တိုင်းတာနိုင်တာတွေရှိသလို ကံဇာတာ၊ စန်း၊ လာဘ်ဆိုတာလည်း ရှိပါသေးတယ်။ စိတ်ရင်းစေတနာလည်း ရှိတယ်။ အဲတာတွေကို သုတေသနလုပ်မရပါ။
၁။ ဆရာရှင့် မိန်းကလေးပါ အပျိုပါ အသက် ၃၄ပါ ဖျားတာဆေးခန်းပြတော့ zinc ဓာတ်နည်းပြီး လျှာမှာ အဖြူကွက် ဖြစ်နေတယ် ပြောပါတယ်ဆရာ အဲ့ဒါဘာကြောင့်ဘာလဲနားလည်အောင်ရှင်းပြပေးစေလိုပါတယ်ရှင့် အဖျားက ၁၀၃,၁၀၂ ပါ ဘယ်ဘက်တခြမ်းပါးရိုးမေးရိုးတွေနာပြီး နှာကတဘက်ပဲစီးပါတယ်ဆရာ
ဖျားစေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေက များတယ်။ အများဆုံးဖြစ်တတ်တာက ဗိုင်းရပ်စ်တမျိုးမျိုးကြောင့်။ နောက် ဗက်တီးရီးယားတွေကြောင့်။ နှာစေးအအေးမိတာက ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်။ လည်ပင်နာ အာသီးရောင်က ဗက်တီးရီးယားကြောင့် များတယ်။ ဗက်တီးရီးယားကြောင့်ဆိုရင် ပဋိဇီဝ ခေါ် ပိုးသေဆေးလိုမယ်။ ဖျားတာနာတာတိုင်း ပါရာစီတမော၊ အိုင်ဘူပရိုဖင် ဆေးတမျိုးမျိုးလိုတယ်။ လျှာဖြူတာ များသောအားဖြင့် ဖန်းဂတ်စ် ခေါ် မှိုပိုးကြောင့်ဖြစ်တယ်။ စမ်းသပ်စစ်ဆေးပေးတဲ့ဆရာဝန်က သူ့လူနာအကြောင်း ပိုသိတယ်။ ကျွန်တော်က ဆေးပညာစာသာရေးပါတယ်။
၂။ ဆရာခင်ဗျာ အထင်ပါပုံဟာ Tiens company မှ Zinc ဓာတ်စာပုံဖြစ်ပါတယ်။ ကျတော်သိသလောက် zinc သတ္တုဓာတ် ဖြစ်တာကြောင့် 40mg ထက်ပိုမိုမသုံးစွဲသင့်ကြောင့် ဆောင်းပါးတခုမှာဖတ်ထားမိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ယ္ခု Zinc ဓာတ်စာဟာ Organic ကနေရတာဖြစ်လို့ ဘေးဥပဒ် မရှိဘူးလို့ သူတို့ company က တာဝန်ရှိသူကပြောရောင်းနေပါတယ်။ FDA လဲ ရထားပြီးသားလို့ပြောပြန်ပါတယ်။ Organic Zinc ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးပါလဲခင်ဗျာ။ Zinc ရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးက ပျို့မယ်၊ အန်မယ်၊ ဝမ်းပျက်မယ်။ ယ္ခု Zinc က ကြိုက်သလောက်စားသုံးနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ Organic Zinc မှာ တကယ် limit မရှိသုံးစွဲနိုင်ပါသလား။
အောဂဲနစ်ဆိုတာ ဘာလဲ။ Organic Food (အော်ဂဲနစ်) http://doctortintswe.blogspot.com/2015/10/organic-food.html အဲဒီစာမှာ ရေးထားပါတယ်။
၃။ ကျွန်မက အသက် ၃၃ နှစ်နှင့် အမျိုးသားက အသက် ၄၂နှစ်ပါ။ အိမ်ထောင်သက် ၃နှစ်ရှိပါပြီး တားဆေးများ လုံးဝမသုံးစွဲခဲ့ပါရှင့်။ OG ကိုပြသောအခါ Ultrasound & TVS စစ်ခိုင်းပါတယ်ရှင့်။ OG ၏ညွှန်ကြားချက်အရ ကျွန်မကတော့ femol နှင့် Vitamin E-400IU ကို တနေ့တလုံးစီဖြင့် ၂ နှစ်ကျေ်ခန့် သောက်ခဲ့ပါတယ်ရှင့်။ ကလေးယူနေတာ ခုထိမရဘူးဖြစ်နေပါတယ်ရှင့်။ တချို့ကတော့ အမျိုးသားကို Zinc ပါဝင်နှုန်းများသောဆေးကို သောက်ရန် ပြောပါတယ်ရှင့်။ မည်သို့ပင်ဆိုပါစေ ကျွန်မကတော့ ဆရာ့လိုတက်သိနားလည်သော ပညာရှင်၏ အကြံပြုချက်ကို သိလိုပါတယ်ရှင့်။ ဆရာရှင့် ကလေးရနိုင်စေရန် မည်သို့နေထိုင်စားသောက်ရမည်၊ မည်သည့် ဆေးဝါးများကို ဖြည့်စွက်မှီဝဲရမည်ကို အကောင်းဆုံး အကြံဥာဏ်များ မျှဝေပေးစေလိုပါတယ်ရှင့်။ Zinc ၏ သိမှတ်ဖွယ် အဖြာဖြာလည်းကို မျှဝေပေးစေလိုတယ်ရှင့်။
၄။ ဆရာရှင့် ကျွန်မသမီး အသက် ၁ နှစ်တုန်းက ဝမ်းစသွားပါတယ်။ တပတ်လောက်နေတော့ ပျောက်သွားပါတယ်။ တပတ်ခန့်ကြာ ပြန်ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးဆရာဝန်က zinc အားနည်းလို့ ပြန်ဖြစ်တယ်ပြောပြီး becozinc အားဆေးတိုက်ဖို့ ညွှန်ပါတယ်ဆရာ။ ကျွန်မသိချင်တာက zinc ဆေးသောက်ချင်ရဲ့ အကျိုး အပြစ်လေးတွေပါဆရာ။
၅။ ဆရာခင်ဗျာ tiens ကုမ္ပဏီကထုတ်တဲ့ zinc ကို ကလေးကျွေးလို့ရတယ်ပြောနေလို့ သူ့အဖွားက နို့ဗူးထဲ ထည့်ဖျော်ကျွေးတယ်။ နောက် pollen လည်းတိုက်တယ် တစ်ရက် ၂ လုံး ကျွန်တော်က မတိုက်ချင်ဘူး၊ သူ့အဖွားက တိုက်နေတယ်။ ရှင်းပြပေးပါဦးခင်ဗျာ။
၆။ ကျွန်တော်က ရန်ကုန်ကပါ။ ကျွန်တော့်ကို ဆရာဝန်တယောက်က ဇင့်ပါတဲ့အားဆေး သောက်ဖို့ ညွှန်းခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီ ဇင့်ဓါတ်ဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာသိပါရစေ။ ဇင့်ဆေးပြားရော သီးသန့်သောက်လို့ရပါသလား။
မြန်မာပြည်လို မချမ်းသာတဲ့တိုင်းပြည်တွေမှာ ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောဖြစ်တာ အလွန်များတယ်။ နှစ်စဉ် ကမ္ဘာမှာ အသက် ၅ နှစ်အောက်ကလေးပေါင်း ၁ သန်းကျော် ဝမ်းပျက်ရောဂါခံစားနေကြရတယ်။ အများစုက သေရတယ်။ သေဆုံးမှုပေါင်းရဲ့ ၁၃% ရှိတယ်။ ORS ဓါတ်ဆားရည်သုံးပါ။ ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ဓါတ်ဆားနဲ့ရေကိုပြန်ဖြည့်ပေးတယ်။ ကလေး အသက် ၆ လအောက် Zinc supplementation 10 mg per day နဲ့ ၆ လအထက် 20 milligrams per day သွပ်ဓါတ်ကို ၁ဝ-၁၄ ရက်တိုက်ပါ။ ဝမ်းလျှောတဲ့ဒဏ်သက်သာမယ်။ ထပ်ဖြစ်တာကိုလည်း နောက်ထပ် ၂-၃ လ နည်းစေမယ်။ zinc sulphate, zinc acetate or zinc gluconate တွေကိုသုံးတယ်။
လူတွေအတွက် အားဆေးဆိုရင် အများအားဖြင့် (ဗီတာမင်) တွေလို့ သိကြတယ်။ ဒါအပြင် ဓါတ်ဆားတွေလဲ လိုပါတယ်။ ဥပမာ သွေးအားကောင်းဘို့ သံဓါတ်ကို အတော်များများသိကြတယ်။ လည်ပင်းကြီးရောဂါ မဖြစ်စေတဲ့ (အိုင်အိုဒင်း) ကိုလဲ တချို့သိကြတယ်။ အလားတူ မပါမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဓါတ်ဆားမျိုးစုံထဲမှာ (သွပ်ဓါတ်) လဲပါတယ်။ သံဓါတ်ဆေး များသူတွေမှာ သွပ်ဓါတ်နည်းစေတတ်တယ်။ သွပ်ဓါတ်များပြန်ရင်လဲ ကြေးနီဓါတ်နည်းစေပြန်တယ်။
လူရဲ့ဇီဝဖြစ်စဉ်မှာ လိုအပ်တဲ့ (အင်ဇိုင်း) ပေါင်း ၁ဝဝ လောက်မှာ သူပါတယ်။ ရောဂါပြီးစနစ်၊ (ပရိုတင်း) တည်ဆောက်မှု၊ အနာကျက်စေမှု၊ DNA မျိုးဇီဇတည်ဆောက်မှုနဲ့ (ဆဲလ်) တွေ ပွါးများမှုတွေမှာ သွပ်ဓါတ်ပါရတယ်။ အနံ့နဲ့ အရသာ အာရုံခံရာမှာလဲ သူ့အခန်းပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်၊ ကလေးငယ်ဘဝ၊ လူငယ်ဘဝတွေမှာ ပိုလိုတယ်။ အသက် ၆ လအောက် ကလေးတယောက်မှာ တနေ့ကို2mg လိုပြီး၊ ၁၄ နှစ်သားရောက်ရင် 11 mg လိုတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့ နို့တိုက်ချိန်တွေမှာ 13-14 mg လိုတယ်။ ယောက်ျားတွေမှာ Zinc သွပ်ဓါတ်နည်းရင် သုက်ပိုးအရေအတွက်နည်းတယ်။
သွပ်ဓါတ်နည်းနေသူတွေမှာ ကြီးထွားမှုနှေးတယ်၊ အစားပျက်တယ်၊ ရောဂါပြီးစနစ်ကို ထိခိုက်တယ်။ ဆိုးသူတွေမှာ ဆံပင်ကြွတ်တယ်။ ဝမ်းလျောတယ်၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတယ်၊ ပန်းသေတာဖြစ်တတ်တယ်။ ပိန်တယ်၊ အနာကျက်တာနှေးတယ်၊ အရသာပျက်တယ်၊ စိတ်ထိုင်းမှိုင်းတာတွေလဲ ဖြစ်တတ်တယ်။
သတ်သတ်လွတ်စားသူတွေမှာ သွပ်ဓါတ် ၅ဝ% နည်းနေတတ်တယ်။ အရက်စွဲသောက်သူတွေမှာလဲ ၃ဝ-၅ဝ% နည်းနေတယ်။
သွပ်ဓါတ်ဟာ ပင်လယ်စာ ကမာမုတ်မှာ (76.7 mg) အများဆုံးပါတယ်။ အမဲ-ဆိတ်-ဝက်-သိုးသား၊ (8.9 mg)၊ ဝက်သား (4.2 mg)၊ ကြက်သား (2.7 mg)၊ ပဲတွေမှာ (1.3 mg)၊ အများဆုံးပါတယ်။ ပြုပြင်မထားတဲ့ ဂျုံ-ဆန်-ပြောင်း အစေ့အဆံ၊ နို့နဲ့နို့ထွက်စာ၊ ဆီရီရယ်ခေါ်မနက်စာ၊ အသား၊ ငါး၊ ပဲ၊ ဥ၊ သီဟိုဠ်သရက်စေ့၊ ဗာဒံစေ့၊ အစေ့အဆံတွေမှာလဲ ပါတယ်။
အအေးမိလို့ သောက်ရ-ငုံရတဲ့ဆေး၊ နှာခါင်းထဲထည့်ရတဲ့ဆေးတွေထဲမှာပါနေတယ်။ ဒါပေမယ့် ဇင့်ပါတဲ့ နှာခေါင်းထဲ ဖြန်းတဲ့ဆေးကို ကြာရှည်သုံးရင် အနံ့မရဖြစ်သွားတတ်တယ်။
Quinolone antibiotics (Cipro) နဲ့ Tetracycline (Achromycin) ဆေးတွေနဲ့ တချိန်ထဲတွဲပေးတာ မကောင်းဘူး။ အဆစ်နာအတွက်ပေးတဲ့ Penicillamine ဆေးလဲအဲလိုဘဲ။ Chlorthalidone and Hydrochlorothiazide ဆေးတွေက သွပ်ဓါတ်ကို များများစွန့်ထုတ်စေတယ်။
သွပ်ဓါတ် တနေ့တာ လိုအပ်ချက်
• အသက် 0-6 လ =2mg ထက်မနည်း၊4mg ထက်မများသင့်၊
• အသက်7လ -3နှစ် =3mg ထက်မနည်း၊5mg ထက်မများသင့်၊
• အသက် 4-8 နှစ်=5mg ထက်မနည်း၊ 12 mg ထက်မများသင့်၊
• အသက် 9-13 နှစ် = 8 mg ထက်မနည်း၊ 23 mg ထက်မများသင့်၊
• အသက် 14-18 နှစ် = 11 mg ထက်မနည်း၊ 34 mg ထက်မများသင့်၊
• အသက် 18 နှစ်အထက် = 11 mg ထက်မနည်း၊ 40 mg ထက်မများသင့်၊
• ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် = 12 mg ထက်မနည်း၊ 34 mg ထက်မများသင့်၊
သွပ်ဓါတ်ဆေးကို ဘယ်တိုင်းပြည်ကနေထုတ်တာဖြစ်ဖြစ် ဘေးထွက်သက်ရောက်မှုတွေရှိတယ်။ တချို့မှာ ပျို့-အန်၊ ဝမ်းပျက်၊ သတ္တုနံ့ရ၊ အစားပျက်၊ ခေါင်းကိုက်၊ အစာအိမ်နဲ့ ကျောက်ကပ်ထိခိုက်နိုင်တယ်။ တနေ့မှာ 40 mg daily ထက်ပိုရင် မကောင်းပါ။ ရေရှည်သောက်ရင် ကောပါးဓါတ် ခေါ် ကြေနီဓါတ်နည်းစေမယ်။ HDL cholesterol ခေါ် ကောင်းတဲ့ ကိုလက်စထော နည်းစေမယ်။ ဆောရီး။
FDA ခွင့်ပြုချက်အကြောင်း ခဏခဏ (ခဏခဏ) ရေးပါတယ်။ ယူအက်စ်အေပါအဝင် နိုင်ငံတိုင်းမှာ ဖြည့်စွက်စာ၊ အားဆေး၊ ဗီတာမင်နဲ့ ဓါတ်ဆားလို့ ခေါင်းစဉ်တပ်လျှောက်တာမှန်သမျှကို ခွင့်ပြုပါတယ်။
ကျွန်တော်နားမလည်တာလေတွေ မေးချင်လို့ပါဆရာ။ ယခုမှ online ပေါ်မှာ ခဏခဏတွေ့ရတဲ့ သက်ငယ်မုဒိန်းမှုတွေမှာ တချို့အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ မိန်းကလေးတွေမှာ ကိုယ်ဝန်ရှိတာတို့ ကြားရတယ်ဆရာ။ ကျွန်တော်မေးချင်တာက အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ကလေးတွေမှာ ကိုယ်ဝန်ရှိနိုင်ပါ့မလားဆရာ ကျေးဇူးပြုပြီး ဖြေပေးပါဆရာ။
အဲလို အွန်လိုင်းသတင်းတွေကို ပြန်မရေးပါ။ မသေချာတာတွေ။ ရာသီလာ မျိုးဥထွက်ချိန်ကစပြီး ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ပြီ။
မိန်းကလေးတွေ ယေဘုယျအားဖြင့် အသက် ၁ဝ နှစ်ကနေ ၁၄ နှစ်မှာ အပျိုစဖြစ်ကြတယ်။ ၁၂ နှစ်ကနေ ၁၆ နှစ်ကျမှ ဖြစ်တာလည်း ရှိတယ်။ အာဖရိကန်နွယ်ဝင်အမေရိကန်မိန်းကလေးတွေက ၉ နှစ်မှာစဖြစ်ကြတယ်။
အပျိုဖြစ်စောလွန်းခြင်းဆိုတာ Precocious puberty ဖြစ်တယ်။ ဘာလို့ အဲလို တခြားမိန်းကလေးငယ်တွေထက် စောသလဲ။ အတိအကျပြောရခက်တယ်။ ဖြစ်နိုင်တာတွေတော့ ရှိပါတယ်။
- Congenital adrenal hyperplasia (CAH) ခေါ် မွေးရာပါ အဒရီနယ်ဂလင်း ပွါများနေခြင်း၊
- McCune-Albright Syndrome ဆင်ဒရုမ်း၊
- Spina bifida with hydrocephalus မွေးရာပါ ခါးရိုးဆစ်မလုံခြင်းနဲ့ ဦးနှောက်ထဲမှာ အရည်များခြင်း။
- Social factors ဆိုရှယ်အကြောင်းခံရှိခြင်း၊ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုနည်းခြင်း၊
- Environmental contamination ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှု၊
- Cancer treatment ကင်ဆာကုသမှုခံယူရခြင်း။
အပျိုဖြစ်စောနေတာကို လိုအပ်ရင် Nafarelin နဲ့ leuprolide ဆေးပေးကုသနိုင်တယ်။ အထူးပြုသင်ကြားမှုတွေ လိုပါမယ်။
1. Puberty Education for Kids အရွယ်ရောက်ခြင်းအကြောင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2016/10/puberty-education-for-kids.html
2. Precocious puberty အပျိုဖြစ်စောခြင်း hhttp://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/puberty.html
3. Puberty အရွယ်ရောက်ပြီ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/puberty.html
ရာသီလာစလတွေမှာ မျိုးဥမထွက်သေးတဲ့မိန်းကလေး မနည်းပါ။ အဲတာဆို ကိုယ်ဝန်မရနိုင်။ အွန်လိုင်းနဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်သတင်းတွေ အများစုကို မယုံပါ။ ဆောရီး။
ဆရာရှင့်သမီ:ရဲ့ဘယ်ဘက်သားဥအိမ်မှာ chocolate cyst ရှိပါတယ်ရှင့် og က ရာသီစက်ဝန်းပိတ်အောင် တားဆေးကို စားခိုင်းပါတယ်ရှင့် ၂၈လုံးပါတာကို သမီးက ၂၅လုံးအထိသောက်တယ်ရှင့် ကျန်တဲ့သုံးလုံး ကျန်တဲ့အချိန်မှာ ရာသီလာပါတယ်ရှင့် တကယ်လို့ သမီးက လုံးဝမလာအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင် ၂၁လုံးဘဲသောက်ပီး ကျန်တဲ့ ၇လုံးကို မသောက်ဘဲ နောက်တကဒ် ၂၁လုံးကိုစသောက်ရင်ရလားရှင့် ရာသီမလာအောင် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ
Chocolate cyst ချောကလက် ဆစ် https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/chocolate-cyst.html
ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာရှင့် သမီးက ဘယ်ဘက် ovary မှာ chocolate cyst ရှိပါတယ်ရှင့် size က 3.8cm x 2.3cm ရှိပါတယ်ဆရာ ဟိုအရှေ့လက ရန်ကုန်ခဏပြန်တော့ပြကြည့်တာOG ကတားဆေးသောက်ခိုင်းပါတယ်ဆရာ ခွဲဖို့စုတ်ထုတ်ဖို့မလိုသေးဘူးတဲ့ အမကသောက်ခိုင်းလို့ fame ကထုတ်တဲ့ဆေး bio crush and soya min အပြင် turmeric powder and olive oil လည်းသောက်ပါတယ်ဆရာ အဲ့ဒီ့အပြင် သမီးထပ်ပီး life extension ကထုတ်တဲ့ vitamindand k with sea iodine လည်းထပ်သောက်လို့ရလားရှင့် bio crush and so Yamin နဲ့တွဲပီးဆရာ သမီးက အသက် ၃၄အိမ်ထောင်သည်ပါဆရာ အခု့့ မှာအလုပ်လုပ်နေပါတယ် ဒီမှာပြတာ ဈေးအရမ်းကြီးလို့ပါဆရာ og ကတော့ ကလေးမြန်မြန်ယူဖို့ပြောပါတယ်ဆရာ ကလေးရနိုင်လား မရနိုင်လားတော့ မသိပါဘူးဆရာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ
ချောကလက်ဆစ်စာ ပို့ထားပြီး။ မေးခွန်းတဲပါဆေးတွေက ကြော်ငြာဆေးတွေသာဖြစ်တယ်။ ကြော်ငြာဆေးဆိုတာ ပိုက်ဆံလိုချင်လို့ရောင်းတာ။
ဆေးရောင်းသူတွေ ပူစရာမလို။ ကျွန်တော်ဘယ်လိုရေးရေး ရောင်းရပါမယ်။ ကွန်ဂရက်ကျူလေးရှင်း။
ချောကလက် ဆစ် ဘယ်လိုကုသမလဲ
ခွဲစိတ်ပြီး သားသမီး ရ မရ အာမခံချက်တော့ မရှိပါ။ ဆောရီး။ ရောဂါကိုတော့ စနစ်တကျ ကုသရပါမယ်။ ဆေးကုသနည်းတွေထဲမှာ မေးခွန်းထဲကဆေးတွေ တခုမှမပါ။ ကျွန်တော်က နိုင်ငံရေးမှားလည်း မအားနာ။ ဆောရီး။ မြန်မာစာမှာလည်း အားမနာ။ ဆောရီး။ ဆေးပညာမှာလည်း အားမနာ။ ဆောရီး။
Functional medicine အကြောင်း ခေတ်စားနေလို့ ဗဟုသုတလေး ဖြန့်ဝေပေးပါဦး ဆရာ အကောင်းအဆိုး ချင့်ချိန်နိုင်ကြဖို့အတွက်ပါ ဆရာ
မေးခွန်းတွေအရ ခေတ်စားဆိုတာတွေ၊ လူပြောများဆိုတာတွေကို ဟုတ်တယ်လို့ မထင်ပါ။ ဆောရီး။
Functional Medicine ဆိုတာ ဇီဝဗေဒကိုအခြေပြုတယ်။ ရောဂါအမည်တပ်ရာမှာ ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းခံ တခုမကဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူဆနည်းဖြစ်တယ်။ ဥပမာ စိတ်ကျရောဂါဟာ တခြားအကြောင်းအမျိုးမျိုးအပြင် အင်ဖလမေးရှင်း ခေါ် ရောင်ရမ်းဖြစ်စဉ်လည်းပါနိုင်တယ်။ အလားတူ အင်ဖလမေးရှင်း ခေါ် ရောင်ရမ်းဖြစ်စဉ်ရဲ့ အကြောင်းခံကလည်း စိတ်ကျခြင်းအပါအဝင် တခြားအကြောင်းခံတွေကနေဖြစ်စေနိုင်တယ်။
တိကျတဲ့ရောဂါအမည်တပ်ရာမှာ လူနာရဲ့ ဂျင်းန် ခေါ် မျိုးဗီဇ၊ ပတ်ဝန်းကျင်အခြအနေ၊ လူနေမှုပုံစံတွေပါပါဝင်တယ်။
ကုသနည်းမှာ အကြောင်းခံအရလုပ်ပေူမှသာ ရောဂါလကဏာတွေသက်သာတာထက်လွန်ကဲပြီး အကျိုးများစေမယ်။
ဆရာရှင့် English ဆေး နှင့် Burma ဆေးတွဲသောက်လို့ရလားရှင့်
တွဲသောက်လိုတဲ့ English ဆေး နှင့် Burma ဆေးတွေရဲ့ အမည်သိပါသလား။ လူနာ ကျား-မ သိစရာလိုတယ်။ အသက်လိုတယ်။ ရောဂါအစစ်အမှန်အမည် သိစရာလိုတယ်။ ရမ်းဖြေလို့ မရ။
ဗမာဆေးဆိုတာ ဘာလဲ မေးရဦးမယ်။ တိုင်းရင်းဆေး၊ ဟာဗယ်ဆေး၊ ဆေးမြီးတို၊ လမ်းဘေးဆေး၊ အရပ်ဆေး။
နောက်ပြီး အာယုဗေဒဆေး။ တရုပ်ဆေး။ ကုလားဆေး။ ကိုရီးယားဆေး။ ဂျပန်ဆေး။ အာရတ်ဆေး။ ဟိုဆေး သည်ဆေး။ နိုင်ငံပေါင်းက ၁၉၅ နိုင်ငံ။ နိုင်ငံတခုမှာ ဆေးနည်းက ရေတွက်မရအောင်များတယ်။ ဆရာဝန်ဆေးနည်း မဟုတ်တိုင်းတော့ ဘားမားဆေးလို့ ခေါ်တာမသင့်။
Alternative medicine ဆေးကုနည်းမှာ တခြားနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။
• Herbal medicine အသီး၊ အရွက်၊ အခေါက်၊ အမြစ်တွေက ထုတ်တဲ့ဆေးတွေ၊
• Traditional Chinese medicine တရုပ်တိုင်းရင်းဆေးတွေ၊
• Homeopathy ဟိုမီယိုပသီဆေးတွေ၊
• Naturopathic medicine သဘာဝဆေးတွေ။
• Acupuncture အပ်စိုက်နည်း၊
• Chiropractic and Ayurvedic အာယုဗေဒနည်း၊
• Energy medicine အင်နာဂျီဆေးတွေ၊
• Magnetic field therapy သံလိုက်ဓါတ်သုံး ကုသနည်း၊
• Aromatherapy အမွေးနံ့သာနဲ့ ကုသနည်း၊
• Oxygen therapy အောက်စီဂျင်သုံးကုသနည်းတွေပါတယ်။
• ဒါတွေအပြင် ဘုရားကုနည်း၊ အထက်လမ်းနည်း၊ အောက်လမ်းနည်း၊ ဓါတ်စာနည်း၊ စတာတွေလည်းရှိသေးတယ်။
Alternative medicine တခြားဆေးကုနည်းများ https://doctortintswe.blogspot.com/2015/05/alternative-medicine.html
မင်္ဂလာပါဆရာ အမည့့် နေရပ် အရာတော်မြို့နယ်ကပါ အသက် 26yrs ရွာမှာစာကြည့်တိုက်ဖွင့်မှာမို့ စာအုပ်လှူချင်လို့ပါ။ ကလေးရော လူကြီးတွေအတွက်ပါ ဘယ်လိုစာအုပ်မျိုးတွေလှူသင့်လဲဆိုတာကို အကြုံပြုပေးစေချင်ပါတယ်။
ကောင်း။ ဆရာ့သဘောကတော့ စာအုပ်တွေက ဟောင်းလေ ကောင်းလေ။ ပြန်ထုတ်စာအုပ်တွေမှာ ၉၉% က ပေါ်လစီသတ်ပုံတွေနဲ့။ ရှောင်မရ ပြေးမလွတ်။ မတတ်နိုင်။
စာအုပ်ဆိုတာ စုံလေကောင်းလေ။ ကာတွန်းကနေ စွယ်စုံကျမ်းအထိ အသုံးဝင်ပါတယ်။
စာအုပ်လှူတာကို အလွန်အားပေးတယ်။ ကွန်ဂရက်ကျူလေးရှင်း။
ကွန်မင့်တခုကို အင်္ဂလိပ်လိုရိုက်ထားပြီး ပုံနဲ့တွဲပို့ပါတယ်။ ပုံထဲမှာ တထောင့်တညပုံပြင်များစာအုပ် လေးတွဲပုံကို တွေ့ပါတယ်။ အဖုံးတိုင်းက သတ်ပုံအမှားကိုလည်း တန်းမြင်ပါတယ်။
I prefer to the termite eaten old books than the brand new look-good laser-printed ones with policy spellings.
ကျွန်တော်ကတော့ ခြထိုး၊ ပိုးဟပ်စားနေပေမဲ့ သတ်ပုံမှန်တဲ့စာအုပ်ဟောင်းတွေကိုသာ တန်ဖိုးထားတယ်။ လေဆာ ပရင်တာနဲ့ ကွန်ပြူတာစာစီထားတဲ့စာအုပ်သစ်တွေကို စာအုပ်စဉ်မှာ တင်မထားချင်ပါ။ လက်ဆောင်လည်း မရချင်ပါ။
ရုပ်ရှင်တွေမှာသာ မဟုတ်ပါ၊ မြန်မာစာနဲ့ စာအုပ်တွေလည်း ပေါ်လစီထုတ်တွေ များလွန်လွန်းလှတယ်။ အရင်က အမိန်နဲ့ခိုင်းတယ်။ အခုက လုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ခိုင်းတယ်။ ပျက်စီးတာခြင်း အတူတူပါပဲ။
ဆရာ မြင်စိုင်းရွှေပြည် ကဗျာမှာ ဟုတ်တည်း သည်ရင်း သည်ရင်း လို့ပါတယ်။ အဲဒီသည်ရင်းကို သူတို့က မယားလို့ အနက်ဖွင့်တယ်။ ဒီနှစ်ကျမှ ဖွင့်တာဆရာ။ ပေါရာဏလို့ သူတိုပြထားတယ်။ အဲဒါလေ ဝေဖန်ပေးပါဦးဆရာ။ ကျေးဇူးပါ။
သည်ပင် = သည်မျိုး = သည်ရင်း = သည်ရန် = သည်လျာ = စည်တောင်း = မယား-လင် (သယ်သံထွက်)။
သည်ရင် = ဆွေးသည်၊ မယား-လင်
တာဝတိံသာ၊ နတ်ရွာလော၊ နတ်ရွာလော
ဟုတ်တည်း ရှင်ချင်း ရှင်ချင်း။
ဟုတ်တည်း ဆွေရင်း ဆွေရင်း။
ဟုတ်တည်း သည်ရင်း သည်ရင်း။
မြင်စိုင်းဟူသည်၊ ရွှေပြည် ရွှေပြည်။
သရီရ ဓာတ်စွယ်၊ ဓာတ်စွယ်။
ခါနှင့် ဘုတ်ချိုး၊ ကြက်တောမျိုး
နန်းခွင် ရှုတင့်တယ်၊ ရှုတင့်တယ်။
အထူးလော၊ တက်တိမ်လော၊ နေရောင်လော။ (ငါးစီးရှင်ကျော်စွာ)
သည်မိုး သည်လေ သည်လူတွေ (ဿီသံထွက်)
သည်ဝါသံခံ = မင်းစေလုလင်
အဆိုသည် (အဆိုတော်) (ဿယ်သံထွက်)
စာအုပ်သစ်တွေ ဘုတ်အုပ်သစ်တွေမှာ စလုံးတွေကများလှတယ်။ စလုံးဆိုတာ စင်္ကာပူမဟုတ်။ တစသတ်တွေဟုတ်။
တကျွန်းပြန်ကရေးလည်း စသတ်နေလိုက်တာ ဂျွမ်းကိုပြန်လို့။ ကျွန်းဆိုတာ ရေလယ်ခေါင် သောင်ထွန်းတဲ့ ကျောက်ပြင် မဟုတ်၊ ကိုကိုးကျွန်းဟုတ်။
အမြစ်ကနေလှန်ပြလို့ ပုတ်သင်ဥပေါ်၊ ဘောင်းတော်ညိတ်၊ စိတ်တော်သိသူများအလုပ်။ ဘောင်းတော်ညိတ်ဆိုတာ ဘုရားထူး အဘခေါ်သူဟုတ်။
မော်ဒန်စာရေးဆရာ၊ ကဗျာဆရာတွေရဲ့စာအုပ်တွေကို ဟိုခေတ်ကမော်ဒန်ကာတွန်းနဲ့ မလဲချင်တာဟုတ်။
အဲလိုမြန်မာစာအုပ်တွေက (ကန်တော့ပါ) ပုဂံဘုရားတွေလို လက်ညှိုးထိုးမလွဲ များလှတာဟုတ်။
စစ်တွေနဲ့နေခဲ့ရတဲ့တိုင်းပြည်မှာ တစ်တွေနဲ့သာရေးတတ်ကြတော့တာ ဟုတ်။ စစ်တွေဆိုတာ မြို့ မဟုတ်။
တစ်တွေဆိုတာ အိုအင်န်အီး ဝမ်းမဟုတ်။ စသတ်ခိုင်းတဲ့ နံပါတ်ဝမ်းကြီး ဟုတ်။
အတွေ့ ရုပ်ရှင်ကားမှာ မင်းသမီးစံရှားတင် အဖေနေရာက ပြောသွားတဲ့ နောက်မှရောက်ရားဆိုတဲ့ ဒိုင်ယဲလာ့ဂ် (Dialogue) က နောင်ခါလာ နောင်ခါဈေးဆိုတဲ့ ဆိုလိုရင်းမျိုးလို့ စိတ်ထဲ မှတ်လိုက်မိတယ် (ယောက်ယား လို့ ပြောတာတော့ မဟုတ်လောက်ပါဘူး) အဲ့ဒီ ရောက်ရားကရော သတ်ပုံပြဋ္ဌာန်း ရှိပါသလား အရပ်သုံးစကားသက်သက် သုံးတဲ့ အသုံးလား သိချင်ပါတယ်ရှင့်။
ကျွန်တော်လက်လှမ်းမီသလောက် သတ်ပုံစာအုပ်တွေမှာတော့ မတွေ့ပါ။ ရောက်တတ်ရာရာနဲ့ ရောက်ရာပေါက်ရာလို့သာ တွေ့တယ်။
သုမောင်ရေးတဲ့ ခွေးချော်လဲအိမ်ထဲမှာ -
နောင်မှ တဖြည်းဖြည်းချင်း ရောက်ရားဟု သဘောထားသည်လို့ရေးတယ်။
ဆရာမောင်စွမ်းရည်ရေးတဲ့ မောင်မိုးသူ အသက် ၆၀ ပြည့် မွေးနေ့တုန်းက အပယ်ခံကဗျာထဲမှာ -
လာ သွားကြစို့ လာ စားကြစို့ တဲ့။
ရောက်ရားဆိုတာ ဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေအရ ကြည့်လုပ်မယ်။ မီးစင်ကြည့်ကမယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါမယ်။ ကျွန်တေ်ာမှားရင် ပြင်ပါမယ်။
၁။ ဆရာခင်ဗျာ ကျွန်တော်အသက် ၃၅နှစ်ပါ ခုကျွန်တော်ဆီးကျောက်တည်နေလို့ ဆေးစားတာ ၂၅ ရက်ရှိပါပြီ ဆေးစစားပြီး ၁ပါတ်လောက်ကတည်းက ပက်လက်လှန်အိပ်တဲ့အချိန်ထထိုင်တဲ့အချိန်တွေမှာ ခေါင်းမူးလို့ပါဆရာ
ဆီးလမ်းအထူးကုဆရာဝန်ကညွှန်တာ ဟုတ် မဟုတ် မသိ။ ဆေးအမည် မသိ။
၂။ အသက် ၂၅ ကျား အပေါ်သွားအခေါင်းပေါက်ဖြစ်ပီးသွားကိုက်နေသောကြောင့် သွားအကြောသတ်ခြငိးဖြင့်ကုပါမည် သွားကို အကြောသတ်ကုသခြင်း ၏ ဆိုးကျိုးနှင့်ကောင်းကျိူးများသိချင်ပါသည် အပေါ်သွားဖြစ်သောကြောင့်မည်သည့် side effect များဖြစ်နိုင်ပါသလဲ
သွားကို အကြောသတ်ကုသခြင်းဆိုတာ မကြားဖူး။ သွားအထူးကုဆရာဝန်ကလုပ်ပေးတာ ဟုတ် မဟုတ် မသိ။
၃။ ဆရာရှင့် ကျွန်မအသက် ၂၇ပါ။ သားလေးကအခု ၅လပြည့်ပြီးပါပြီရှင့် ။ မိခင်ခန္ဓာကိုယ်ထိန်းရန် detoxing လုပ်ခြင်းသည် ကလေးကျန်းမာရေးနဲ့အာဟာရအတွက် ထိခိုက်နိုင်ပါသလားရှင့်။ ပိန်ဆေးတွေသုံးစွဲရင်လည်း ကလေးအပေါ် ဘယ်လိုသက်ရောက်နိုင်မလဲရှင့်။ သားလေးကအခုထိမိခင်နို့တမျိုးတည်းစို့ပါတယ်။ အခုတလော ဘယ်ဘက်ကိုမစို့တော့ဘဲညာဘက်ချည်းစို့နေပါတယ်။ ပုံမှန်စို့နေကျအတိုင်းစို့ပေမယ့် သူ့အတွက်အာဟာရနည်းနိုင်သလား ဘယ်လိုမျိုးပြုပြင်လျှင် ဘယ်ဘက်ကိုပါပြန်စို့နိုင်သလဲရှင့်။ သားလေးနို့တဘက်တည်းစို့တာကြောင့် မိခင်ကရော ဘာတွေ ဖြစ်လာနိုင်လည်းရှင့်။ ဆရာ့ဆီခဏခဏမေးရတာများမှာစိုးလို့တစ်ခါတည်းစုမေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာ။ ကျေဇူးပြု၍ ဆရာအချိန်ရရင် ဖြေပေးစေချင်ပါတယ်ရှင့်။ ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်
ကလေးက ဝအောင်စို့ပါမယ်။ တဘက်တည်းလည်းရ။ မစို့တဲ့ဘက်က နို့ထွက်နည်းလာနိုင်။ ကြိုးစားတိုက်ကြည့်ပါ။
ပိန်ဆေးတွေ detoxing ခေါ် အဆိပ်ထုတ်ဆေးတွေဆိုတာ ကြောငြာဆေးတွေသာဖြစ်တယ်။ အသိအမှတ်ပြု ပိန်ဆေးစာတွေ ဘလော့မှာဖတ်နိုင်တယ်။
3. Common ပိန်ဆေးတဲ့ နောက်တမျိုး https://doctortintswe.blogspot.com/2017/12/common.html
4. Crash diets ပိန်စာ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/crash-diets.html
5. Fat and Thin ဝချင်သူ ပိန်ချင်သူ အတူတူ https://doctortintswe.blogspot.com/2017/08/fat-and-thin.html
6. Low-fat diets for weight loss အဆီနည်းအစာနဲ့ ဝိတ်လျှော့ခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2017/08/low-fat-diets-for-weight-loss.html
7. Orlistat ပိန်ဆေး https://doctortintswe.blogspot.com/2015/10/orlistat.html
8. Weight gain လှယုံမက ဝချင်သေးပါလျှင် http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/weight-gain.html
9. Weight loss pills are dangerous ပိန်ဆေးတွေအန္တရာယ် http://doctortintswe.blogspot.com/2015/04/weight-loss-pills-are-dangerous.html
10. Weight loss ပိန်ချင်သလား https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/weight-loss.html
11. Xenical ဇန်နီကယ် http://doctortintswe.blogspot.com/2015/06/xenical.html
The Detox Scam လူကြီးမင်းကိုယ်ထဲမှာ အဆိပ်တွေရှိနေသတဲ့ https://doctortintswe.blogspot.com/2016/05/detox-water.html
Detox နဲ့ Cleanse နာမည်တွေနဲ့ ရောင်းကြတယ်။ နိဂုံးချုပ်ရရင် Cleansing your wallet of cash ပိုက်ဆံအိတ်တော့ ပြောင်ပါမယ်။
ကျွန်တော့်ကို အဲလိုကြော်ငြာဆေးတွေမေးတိုင်း စိတ်မှာမပျော်ပါ။ လွဲမှားနေတာကိုဖြေရှင်းပေးရလို့တော့ အကျိုးရှိစေမှာမို့ ကျေနပ်မိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲလိုဟာတွေနဲ့ စီးပွါးရှာနေသူတွေရဲ့ အကျိုးစီးပွါးကိုထိခိုက်စေမှာမို့ စိတ်မကောင်းပါ။ အများကြီးတော့ စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါ။ ကြော်ငြာဖြစ်ပါတယ်ပြောပြော၊ ဘယ်လိုပြောပြော သူတို့ကြိုက်ရင် မျက်စိမှိတ် လိုက်ဝယ်သူကမရှားပါ။ စာဖတ်သူရဲ့ကိုယ်ထဲမှာ အဆိပ်တွေမရှိပါ။
သားဆက်ခြာလား၊ သားဆက်ခြားလားဆရာ။ ခြာကို အဘိဓာန်မှာ ကြိယာအနေနဲ့ တဆက်တည်းမဟုတ် အကြားလပ်သည်။ သား၊ သမီး__။ ခြားကိုတော့ ကြိယာအနေနဲ့ပဲ ပိုင်းကန့်သည်။ တသီးတသန့် ဖြစ်စေသည်။ ကွဲပြားသည်။ တမျိုးတဖုံဖြစ်သည်။ ခြားနားသည်လို့ ဖွင့်ဆိုထားလို့ပါ။ သားဆက်ခြားလား၊ သားဆက်ခြာလားဆရာ။
ခြာ = ကြိယာ = တဆက်တည်းမဟုတ် အကြားလပ်သည်
အခြာ = အထူးထင်ရှားသည်
တချုပ်တခြာ ကြီးအာဏာနှင့် သေချာစည်းကြပ်
ထိုမျှရာဇာ စောချုပ်ခြာတို့ သင်္ချာသရုပ်
ခြား = ကြိယာ = ပိုင်းကန့်သည် တသီးတသန့်ဖြစ်စေသည် ကွဲပြားသည် တမျိုးတဖုံဖြစ်သည်
ခြား = အကြား
မင်္ဂလာပါ ဆရာရှင့်။ ကြော့ နဲ့ ကျော့ ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လိုသုံးလဲ သိချင်လို့ပါရှင့်။ သမီးလေးနာမည် ကျော့ကျော့ ပေးထားတာကို တချို့က ကြော့ကြော့ လို့ရေးနေလို့ အမှန်သိချင်လို့ပါရှင့်။ လေးစားလျက်။
ဆို့့ ရဲဘော်ခင်မောင်လှနှင့် အဖွဲ့
(မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးအတွက် တပ်မတော်ဖွဲ့ဘို့ ဂျပန်ပြည်မှာကွယ် တကယ်ပဲ အသက်နဲ့လဲလို့ ဆင်းရဲဒုက္ခခံကာ ကြံစည်တယ် သူရဲကောင်းတဲ့ ဗိုလ်အောင်ဆန်းနဲ့ အာဇာနည်တွေရယ်)၂ x x x
ငါတို့မြန်မာပြည် မိဘတိုင်းကကွယ် ဗိုလ်အောင်ဆန်းလို သူရဲကောင်းမွေးရမယ်၊ ငါတို့မြန်မာပြည် မိဘတိုင်းကကွယ် အာဇာနည်အစစ်တွေကို ရှိဘို့မွေးရမယ်၊
သြော် ဘုရင့်နောင်နဲ့ ရာဇာဓိရာဇ်တို့လို မင်းရဲကျော်စွာ ပမာပုံနှယ် အလောင်းဘုရားတို့လိုကွယ် မြန်မာတိုင်းမြန်မာမျိုး အားကိုးလောက်ပေတဲ့ မကြောက်တမ်း မရွံ့တမ်း မြန်မာတွေအောင်ပန်းဆွတ်ကြလေပြီကွယ်
(သံပြိုင်) (ရာဇဝင် အထုပတ္တိလဲရှိရမယ် မော်ကွန်းလဲ ထိုးလောက်တယ် မြင့်မြတ်တဲ့ ဗိုလ်အောင်ဆန်းရယ်)၂ x x x တိုင်းပြည်အကျိုးစွန့်ခဲ့တဲ့ မျိုးဇာနည်နွယ် လွတ်လပ်ဘို့ တို့များကို ကျွန်တွင်းမှကယ် ဒို့ဗမာတွေစိုးမိုးဘို့ မျှော်ကြရှာလို့ ပေါ်လာတယ် x x x
မြန်မာ့နိုင်ငံ ထူထောင်ရန်နဲ့ မျိုးရိုးမတိမ်အောင် ကြံဆောင်ပေတယ် နေမျိုးသာကီ မြန်မာပြည်လက်ရုံး ကမ္ဘာနိုင်ငံအလုံး ထင်ပေါ်စေမယ် စိတ်အားသန်သန် မာန်ကိုမလျော့တယ် ငါတို့လူမျိုး တန်ခိုးရှိဘို့ သူရဲကောင်းတွေစုံညီတယ် တကယ်ပင် သတိုးမဟာဗန္ဓုလနှယ် စွမ်းသတ္တိ ရာဇဝင်ပြောင်တယ် သားကောင်းများလို့ ခေါ်ရလောက်ပေတယ် ဥဒါန်းတွင်စေဘွယ် မြန်မာသူရဲ့ကောင်း အပေါင်းတွေရယ် x x x
(သံပြိုင်) (ရာဇဝင့့် ပေါ်လာတယ်) x x x
သဟာယ ဆရာတင် ရေးသားပြီး ကိုမြကြီးဆိုတာကို ဗမာ့သူရဲကောင်းလို့ ခေါင်းစဉ်ပေးပြီး၊ စာသား နည်းနည်းလေး ကွဲလွဲပါတယ်။ https://www.youtube.com/watch?v=AQyS7gdADzE
မှတ်ချက် = တစ်ကယ်ပဲ မဟုတ်။ တစ်ကယ်ပင် မဟုတ်။ နေရာတကာ တစ်နေရှာတဲ့ မြန်မာစာ လွတ်လပ်ရေး ရပါစေသတည်း။
ဆရာ ကျွန်တော်အသက်၂၈နှစ်ပါ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ၅ လပိုင်းလောက်ကစပြီး ပေါင်မုန့်စား လိုက်တာနဲ့ ယားဘုသေးသေးလေးတွေ တကိုယ်လုံးထွက်လာပါတယ် နောက်ပိုင်းဂျုံနဲ့ပက်သက်တာ စားတာနဲ့ ယားဘုတွေက ပိုကြီးလာတယ် ၂၀၁၇ကဆို ရွှေကြည်မုန့် စားမိတာ သွေးပေါင်ထိုးကျ ပြီး နှလုံးခုန်နှုန်း ၁၆၀ ဖြစ်ပီးထဲက ဂျုံ နဲ့ပက်သက်တာ အကုန်ရှောင်လိုက်ပါတယ်ဆရာ သိချင်တာက တသက်လုံးစားလာတာ ဘာမှမဖြစ်ပဲ ကျွန်တော်အသက် ၂၆ နှစ်လောက်မှဖြစ်တာ ဘာလို့လဲဆရာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Gluten ဂလူတင်ဓါတ်ဆိုတာ ဂျုံ၊ ဘာလီနဲ့ ရိုင်းစပါးတွေမှာပါတယ်။ Celiac disease စီးလီးယက်ရောဂါခေါ်တဲ့ ဂျုံကို အလာဂျီရသူတွေက ဒီဓါတ်ကို လုံးဝရှောင်ကြရတယ်။ စီးလီးယက်နဲ့ ဂျုံအလာဂျီနဲ့ မတူပါ။ စီးလီးယက်ရောဂါရှိသူ ကိုယ်အလေးချိန်ကျမယ်။ အန်မယ်။ ဗိုက်ကယ်နေမယ်။ ဗိုက်နာမယ်။ ဝမ်းပျက်လိုက် ချုပ်လိုက်ဖြစ်မယ်။ ဝမ်းအရောင် ပျော့မယ်။ အဆီများပြီး အနံ့ပိုဆိုးတယ်။
ဂျုံနဲ့လုပ်ထားတာစားတိုင်း မတည့်ဖြစ်မယ်။ တချို့က အနံ့ရတာနဲ့ ဖြစ်တယ်။ မတည့်သူ ဂျုံကို အမြဲရှောင်ရမယ်။ ဂျုံနဲ့လုပ်တဲ့အစားအစာတွေကများတယ်။
ဂျုံအလာဂျီမတည့်တာဖြစ်ရင် အလာဂျီဖြစ်စဉ်ရမယ်။ ယားမယ်။ ရောင်မယ်။ ပါးစပ်နဲ့ လည်ချောင်းမှာ နေမထိထိုင်မသာ ဖြစ်မယ်။ အင်ပျဉ်ထမယ်။ နှာခေါင်းပွစိပွစိဖြစ်မယ်။ ခေါင်းကိုက်မယ်။ အသက်ရှူခက်မယ်။ ပျို့အန်မယ်။ ဝမ်းလျှောမယ်။ ကြွက်တက်နိုင်တယ်။ ရှော့ခ် ရနိုင်တယ်။
အလာဂျီကုသနည်းနဲ့ ရှော့ခ်ကုသနည်းတွေအတိုင်း ကုသရမယ်။
ဆရာ မင်္ဂလာပါ ကျွန်တော့အသက် ၄၀ နှစ်ပါ ညအိပ်ပျော်နေရင်း အာခေါင်ခြောက်လို့ပါဆရာ ဘယ်ဘက်လည်ပင်းနဲ့ ဘယ်ဘက်ချိုင်းနားတလျောက်နာကြင်မူ့လည်း ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ဆရာ ရိုသေစွာဖြင့် မေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ သား ၁ရောက် အိမ်ထောင်သယ်ပါဆရာ။
နာကျင်မှုလို့ရေးရတယ်။ တယောက်လို့ရေးရတယ်။ မှုမှာ (့) မလိုအပ်ပါ။
သယောက် = လင်စောင် လင်ငယ်
ယောက်ယား = ယောက်ျား
ရှေးလွန်လေပြီးသောအခါ ဗာရာဏသီပြည်အနီး၌နေသော ဒဂါမခေါ် ရွာတရွာတွင် တံငါသည်ကြီးတဦးရှိသည်။ ထိုရွာ၏တဖက်ကမ်းတွင်လည်း တံငါသည်ကြီးတဦးရှိလေရာ ထိုသူနှစ်ဦးတို့သည် မိတ်ဆွေဖြစ်ကြသည့်အလျောက် မိမိတို့၏သားနှင့်သမီးတို့ကို လက်ထပ်ထိမ်းမြားရန် ကတိထားကြလေသည်။ တယောက်သောအမျိုးသားအိမ်၌ ဒုကူလသတို့သားကို ဖွားမြင်၍ တယောက်သောအမျိုးသားအိမ်၌ ပါရီကာသတို့သမီးကို ဖွားမြင်သည်။ ထိုသူတို့ အရွယ်ရောက်သောအခါ ကတိရှိသည့်အတိုင်း ထိမ်းမြားပေးကြသည်။ (မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း၊ အတွဲ (၁၃)၊ စာမျက်နှာ (၁၅၈)
ရွာတစ်ရွာတွင် မဟုတ်။ တံငါသည်ကြီးတစ်ဦး မဟုတ်။ တစ်ဖက်ကမ်းတွင်လည်း မဟုတ်။ တစ်ယောက်သော အမျိုးသားအိမ်၌ မဟုတ်။
ခေတ်သစ်သုဝဏ္ဏသာမများကား မိခင်ဘာသာစကားကို လုပ်ကြံကြကုန်၏။
ပြည်ပနိုင်ငံရေးဇာတ်ခုံမှာ ဝါအရပြောရင် ကျွန်တော်တို့က အကြီးဆုံးမဟုတ်ပါ။ ကျောင်းသားတွေနောက်မှရောက်တဲ့၊ ၁၉၉ဝ အုပ်စုကဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ရောက်တဲ့သူ နောက်ကတန်းစီရတဲ့ခေတ်မှာပါ။ ဒိနောက်ရောက်လာတဲ့ အုပ်စုတွေလည်း ရှိသေးတယ်။ ၁၉၉၆ အုပ်စု၊ ၂ဝဝ၇ အုပ်စု။
နောက်ဆုံးမှာ နိုင်ငံရေးနဲ့လားလားမှမဆိုင်ဘဲ ရောက်လာသူတွေကနေ ကြီးစိုးလာတယ်။ ဒီမိုကရေစီဓါတ်ပုံတွေထဲမှာတော့ ရှေ့ဆုံးတန်းကနေကြတယ်။ ယူအင်တို့ အင်ဂျီအိုတို့က အဲတာမျိုး အလွန်သဘောကျတယ်။ သူတို့ကို လူဟောင်းတချို့က နောက်လိုက်စုကြတယ်။
ဘာသာရေးခေါင်းစဉ်အောက်ရောက်ရင် နိုင်ငံရေးကို ခါးခါးသီးသီးရန်တွေ့ပြီး၊ နိုင်ငံရေးမှာနေရာပေးရင် ထိပ်ဆုံးက ရချင်သူတွေကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ကြုံခဲ့ရတယ်။
နိုင်ငံရေးအုပ်စုထဲမှာကလည်း အမျိုးမျိုး။ အသက်မွေးမှု မတူတာ၊ ပညာရေးနဲ့ လေ့လာမှု မတူတာ၊ ရည်ရွယ်ရင်း မတူတာ၊ အဲတော့ အခြေအနေကို သုံးသပ်မှုမတူတာတွေရှိပါတယ်။ ဟီးရိုးလုပ်ချင်သူဆိုတာ တကယ်ပါတယ်။ အာဏာရှင်ကို အော်ကြီးဟစ်ကျယ် ဆန့်ကျင်ပြတဲ့သူတချို့ အာဏာရှင်ကအရေးမလုပ်တော့ ဘေးကလူတွေကို လိုက်တုတ်တယ်။
ကျောင်းသားအုပ်စုထဲမှာ အတွေ့အကြုံများလာတော့ တိုးတက်လာသိမြင်လာကြသူတွေ တချို့ရှိတယ်။ ချီးကျူးတယ်။ ကြီးမိုက်ဆိုတာလည်း တကယ်ရှိတယ်။ ဗီဇဥာဉ်ကို မပြင်နိုင်ကြပါ။ တချို့ကလည်း နေရာတကာမှာ ဗိုလ်လုပ်ချင်ကြတယ်။
ထောင်ကျသူတွေထဲမှာ ထောင်ချခံရတာကို ဆုတံဆိပ်လိုသဘောထားကြသူတွေရှိတယ်။ ပြည်ပထွက်ကြသူတွေထဲမှာ တချို့က သူတို့ကိုယ်သူတို့ တက္ကသီလာမှာ အဋ္ဌာရသပညာတွေ သင်ပြီးပြန်လာသလို အထင်ရောက်ကြတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ သင်ခန်းစာတွေ တလှေကြီးရလိုက်တယ်။ ဇာတ်သိမ်းမလှပါ။ တကောင်တလေလုပ်လို့ တလှေလုံးပုပ်ခံလိုက်ရရှာတယ်။ ဒီမိုကရေစီခေတ်ဦးမှာ ပြည်ပသမားတွေ အမှတ် ၄ဝ မရ။ ကျတယ်။
ဝါခေါင်လပြည့်နေ့ဟာ မေတ္တာအခါတော်နေ့လို့ သိရတယ်။ မေတ္တာအကြောင်း ဆေးပညာရှုဒေါင့်က ရေးပါရစေ။
ဆရာရှင့် ကျွန်မသိချင်တာကို ဆရာကသိနေသလို အချိန်ကိုက်တင်ပေးလိုက်သလိုပါ။ မိခင်က သားသမီးကို ချစ်တဲ့စိတ်က ဆေးပညာအလိုဆို ဘယ်နေရာကနေ လှုံ့ဆော်လာတာလဲရှင်။ မေးခွန်းမေးတာ အမှားပါရင် ခွင့်လွှတ်ပါရှင်။
စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကို ဆေးစာနဲ့ဆို Emotions အီမိုးရှင်းတွေလို့ခေါ်တယ်။ ချစ်စိတ်၊ ကြောက်စိတ်၊ ဒေါသစိတ်၊ လိင်စိတ်တွေ အကြုံးဝင်တယ်။ ဦးနှောက်ရဲ့ Limbic system လင်းဘစ်စနစ်ကနေလုပ်ဆောင်ပါတယ်။ Temporal lobe နားထင်ပိုင်းမှာရှိတယ်။ ဦးနှောက် နေရာအမျိုးမျိုးကနေ စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကို ဖြစ်စေတယ်။ Amygdala နေရာက အဓိကကျတယ်။ သူ့ဆီကို မှတ်မိခြင်းနဲ့ သတိထားခြင်း အချက်ပြတွေလာတယ်။ အဲတာတွေကို ပရောဆက်စ်ဇင်း ခေါ် ဆက်တိုက်ဖြစ်စဉ်တွေ လုပ်ပေးတယ်။
Hippocampus ဟစ်ပိုသဲလ်မတ်စ် နဲ့လည်းဆိုင်တယ်။ Hippocampus ဟစ်ပိုသဲလ်မတ်စ်က မှတ်ထားနိုင်စွမ်းနဲ့ဆိုင်တယ်။ ဘယ်နဲ့ညာရှိတယ်။ အဲတာပျက်သွားသူ ဘာတခုမှ မမှတ်မိတော့ပါ။ ဟစ်ပိုသဲလ်မတ်စ်ကနေ Amygdala ဆီ အချက်ပြတွေ ပို့ပေးတယ်။ အရင်က အတွေ့အကြုံ မှတ်ဉာဏ်ကို အသုံးပြုတယ်။
Prefrontal Cortex နဖူးနားက ဦးနှောက်နားက အစိတ်အပိုင်းနဲ့လည်းဆိုင်တယ်။ စောစောကအချက်အလက်တွေကို အခြေခံပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်လုပ်တယ်။
Cingulate Gyrus နေရာက Thalamus သဲလ်မတ်စ် နဲ့ Hippocampus ဟစ်ပိုသဲလ်မတ်စ် ကြားမှာရှိတယ်။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကို မှတ်ထားတယ်။
Ventral Tegmental Area နေရာက သာယာမှုကို မှတ်ထားပေးတယ်။ Dopamine pathways ဒိုပါမိန်း လမ်းကြောင်းတွေကနေ Mood ခေါ် စိတ်မူနဲ့ဆိုင်တာတွေကို ဆောင်ရွက်ပေးတယ်။
Amygdala ခေါ် ဗာဒံစေ့လေးနဲ့တူတာကနေ ကြောက်စိတ်၊ ဒေါသစိတ်၊ ကြမ်းတမ်းစိတ်ခေါ် စိတ်မူအဖြစ်အပျက်တွေကို ထိန်းနိုင်စွမ်းလုပ်ဆောင်ပေးတယ်။ တချို့က မထိန်းနိုင်။ တချို့ကထိန်းနိုင်တယ်။
အခုထိရေးတာက ဆေးသုတေသနတွေကို အခြေခံတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်သုံးသပ်တာ ရေးပါရစေ။
လူတွေဟာ လူရယ်လို့ဖြစ်တည်လာကတည်းကနေ အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲနေတယ်။ တိရစ္ဆာန်သာသာ အရိုင်းဘဝကနေ ယဉ်ကျေးလာကြတယ်။ ခေတ်ကာလအရ တိုးတက်လာတာဖြစ်တယ်။ ခေတ်ကာလအတူတူမှာ နေထိုင်ကြပေမဲ့ မတူတာတွေ ဖြစ်ကြတယ်။ ဆင်းရဲ ချမ်းသာနဲ့ အတတ်ပညာမတူက တမျိုးဖြစ်ပြီး၊ လူစိတ်က တမျိုးဖြစ်တယ်။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေက လူ့အသိစိတ်ဖြစ်တယ်။ လေ့လာသင်ယူမှုတွေနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုမတူရင် မတူကြပါ။ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ မျိုးရိုးဗီဇတွေကလည်း အရေးပါတယ်။
ဗမာစကားမှာ မစားကောင်းတဲ့အသီးလို့ တင်စားပြောဆိုတာရှိတယ်။ လူတိုင်းစားသုံးနိုင်တဲ့အသီးဖြစ်ပေမဲ့ မစားသင့်တာကို ဆိုလိုတယ်။
မိဘတိုင်းက ကိုယ့်သားသမီးကို ချစ်စိတ်ဖြစ်တာ အရိုင်းဘဝကတည်းကရှိတယ်။ ခေတ်ကာလနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေကနေ အလေးအနက်ထားမှုမှာ မတူတာတွေဖြစ်စေတယ်။ ဥပမာ အသက် ၁၈ နှစ်ကျော်ရင် မိဘနဲ့သားသမီး စည်းခြားတာမျိုး တချို့ယဉ်ကျေးမှုတွေမှာ ကျင့်သုံးပြီး မြန်မာပြည်လိုတိုင်းပြည်တွေမှာ ထားလေ့မရှိသလောက်ပါ။
ယဉ်ကျေးမှုလည်းတမျိုးတစားတည်းမှာ အတူနေထိုင်ကြပေမဲ့ တန်ဖိုးထားမှု မတူကြတာရှိတယ်။ အဖေနဲ့ သမီး အစေးမကပ်တာမျိုးရှိတယ်။ သားယောက်ျားလေးသာ လိုချင်သူတွေရှိတယ်။ ကိုယ့်ရင်သွေးကို ရွှေဥလေးလို ထားချင်သူတွေနဲ့ တော်သလိုနေပါစေမိဘတွေလည်းရှိတယ်။
ကျွန်တော်ရေးတဲ့ ကောက်ချက်တွေကို ဦးနှောက်ဘယ်အစိတ်အပိုင်းက လုပ်ပေးနေသလဲ ရှာလို့မရနိုင်လောက်ပါ။ ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေက ရင်ထဲကလို့ ပြောကြတယ်။ သိပ္ပံပညာက မပြည့်စုံသေးပါ။ ချစ်သင့်တာကို ချစ်တတ်ကြပါစေ။ မေတ္တာထားသင့်တာကို ထားနိုင်ကြပါစ။
နှစ် ၅၀ ဖျက်
ရက် ၅၀ နဲ့ မပြင်နိုင်။ (စွမ်း)
ဆရာ - အလယ်လူ အမည်ပြောပါဦး။
မြောက်အီလီနွုက် တက္ကသိုလ်၊ မြန်မာစာပါမောက္ခ ဦးစောထွန်း။ မန်းတကသထွက်ပါပဲ။
ဆရာတင်မိုး၊ ဦးစောထွန်းနဲ့ ဆရာမောင်စွမ်းရည်။ ကျေးဇူး။
ကဗျာဆရာ ဆရာစွမ်းကတော့ နိုင်ငံရေး ရေးသလားထင်ရတယ်။ နိုင်ငံထဲကကျွန်တော်ကတော့ မြန်မာစာလို့ ထင်မိတယ်။
ဘာသာတရား အဆုံးအမလည်း မှန်၏။
ဘာသာစကား အရေးအသားလည်း မှန်၏။
၂၄-၈-၂ဝ၁၈ နေ့ထွက် သုတေသနသတင်းဖြစ်ပါတယ်။ တကမ္ဘာလုံးကိုလေ့လာပြီးမှ ထုတ်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဝိုင်တနေ့ တခွက်သောက်တာလည်း ကျန်းမာရေးအတွက် အန္တရာယ်မကင်းပါတဲ့။ အရက်ဘယ်လောက်နည်းနည်းသောက်တာ စိတ်ချရသလဲ။ မရှိပါတဲ့။
ကင်ဆာနဲ့ တခြားရောဂါတွေရနိုင်ခြင်းဟာ ဝိုင်သောက်လို့ နှလုံးရောဂါကို ကာကွယ်ရာကျနိုင်တယ် ဆိုတာထက် ရောဂါရစေမှာက အလေးသာတယ်။
၁၉၅ နိုင်ငံမှာ ၁၉၉ဝ ကနေ ၂ဝ၁၆ ခုအထိလေ့လာခဲ့တာဖြစ်တယ်။ အသက် ၁၅ နှစ်ကနေ ၉၅ နှစ်အထိပါတယ်။ ယောက်ျားတွေရော မိန်းမတွေပါပါတယ်။
တွေ့ရှိချက်အရ အရက်မသောက်သူပေါင်း တသိန်းထဲက ၁၉၄ ယောက်မှာ အရက်နဲ့ဆက်စပ်မှုစာရင်းဝင် ကင်ဆာနဲ့ ထိခိုက်ဒဏ်ရတွေရကြတယ်။ အရက်တနေ့တွက်သောက်သူပါထည့်တွက်ရင် အဲဒီစာရင်းမှာ လူ ၄ ယောက်ပိုလာတယ်။
တနေ့ ၂ ခွက်သောက်သူတွေဆိုရင် ၆၃ ယောက်ပိုလာတယ်။ တနေ့ ၅ ခွက်သောက်သူဆိုရင် ၃၃၈ ယောက်ပိုလာတယ်။ အသက်သေဆုံးနိုင်တာပါဖြစ်တယ်။
အရက်တခွက်ဆိုတာ အယ်လ်ကိုဟော10g ပါတယ်။ ဝိုင်တခွက်၊ ဘီယာတပုလင်း။
ပုံတခုက ယောက်ျားတွေ အရက်သောက်အများဆုံးနိုင်ငံ ၁၀ ခုနဲ့ နောက်တခုမှာ မိန်းမအရက်သောက်အများဆုံးနိုင်ငံတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံဟာ သုတေသနလုပ်တဲ့နိုင်ငံထဲပါ မပါ မသိပါ။ တလောက အရက်မသောက်ရင် အသက်တိုတယ်လို့ ရေးတာတခုကို လူပေါင်းများစွာက တင်ကြ ရှယ်ကြတယ်။ ရီစရာလုပ်ဇာတ်ပုံပြင်တွေကို တင်ကြ ရှယ်ကြတယ်။
သုတေသနဆိုတာ တယောက်စ နှစ်ယောက်နဲ့ မရ။ တနေရာ နှစ်နေရာနဲ့ မရ။ ဒီအချက်အလက်တွေကို အထင်ကရ သိက္ခာရှိတဲ့ဆေးပညာဂျာနယ် Lancet ကနေ အတည်ပြုချက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
အရက်ကုမ္ပဏီတွေကနေ ပိုက်ဆံပေးခိုင်းတဲ့ သတင်းသမားတွေ ဆရာဝန်တွေက အရက်ကောင်းတာရှာပြီး ကြံဖန် ရေးကြတယ်။ အရက်ဝိုင်းမှာ အရက်ကောင်းကြောင်းတွေ ပြောကြတယ်။ ဆေးရုံတွေမှာတော့ မပြောကြပါ။ ဈာပနတွေမှာလည်း မပြောကြတော့ပါ။ ကျန်ရစ်သူ မိသားစုဝင်တွေကတော့ ဆရာဝန်တွေလိုသိကြတယ်။